10/20/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Sunday, October 20, 2013, under ကျန်းမာရေး | No comments
( ၁ ) Doctor ဝတဲ့သူ တွေမှာ အကြော ပြတ် ကြပါတယ် အကြော ပြတ်တာ ပျောက်အောင် ဘယ်လို လုပ်ရ ပါသလဲ
( ၂ ) ဆရာ ရှင့် အကြော ပြတ် တဲ့ အကြောင်း လေး လည်း ရှင်းပြ ပေးပါဦး ဆရာ။ ကျွန်မ ရဲ့ ဒူးခေါင်း နဲ့ ပေါင်ခြံ တွေမှာ သိသိ သာသာ ကြီး အကြောပြတ် လာပါ တယ်။ အကြောပြတ် တာ ကုလို့ ရပါသလား။ သူများ ပြောတာ သံလွင် ဆီ လိမ်း ရတယ် ဆိုတာ အကြော မပြတ်ခင် လိမ်းရတာ မဟုတ်လား။ ပြတ်ပြီး သား အရာ ကြောင်းကြီး ကော လိမ်းဆေး ရှိပါ သလား ဆရာ။
“ဗိုက်အကြော ပြတ်တယ်” လို့ ပြောလေ့ ရှိတဲ့ ဟာက ရောဂါ တော့ မဟုတ် တတ် ဘူး။ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ တော့ ဖြစ် တယ်။ ဗိုက်မှာ တင် မဟုတ် ပါ။ ရင်သား၊ တင်ပါး၊ ပေါင် စတဲ့ နေရာ တွေ မှာပါ ဖြစ်တတ် တယ်။ ဖြစ်တဲ့ နေရာ မှာ ပြိုင်နေ တဲ့ မျဉ်းကြောင်း တွေလို၊ ပါးလျ၊ ပြောင် ချော၊ အရောင် ဖျော့၊ ဖြစ်စ မှာ အနီရောင်၊ ကြာရင် ငွေရောင်၊ အမာရွတ် လိုလို အပိုတွေ ဖြစ်လာ တယ်။ အနား ရှိတဲ့ ပုံမှန် အရေပြား ထက် နဲနဲ နိမ့်ပြီး၊ ထိ - ကိုင်ကြည့် ရင် ခံစားမှု မတူ ဘူး။
ကိုယ်ဝန် ဆောင် ရလို့ ဖြစ်ရ တာက အများဆုံး ပါ။ ကိုယ်ဝန် ရင့်လာ ချိန် ၇၅% ကနေ ၉ဝ% မိခင် လောင်း တွေ မှာ ဖြစ် ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် မဟုတ် ဘဲ ရုတ်တရက် ဝလာ - ပိန်သွား တာက နေ လည်း ဖြစ်တတ် တယ်။ တခြား အကြောင်း ခံ ရောဂါ တွေ လည်း ရှိသေး တယ်။ ( ကော်တီဇုန်း ) လိမ်းဆေး ကြာကြာ သုံးလို့၊ ဆီးချို ရောဂါ၊ Cushing syndrome, Ehlers - Danlos syndrome, Lichen planus ရောဂါ တခုခု ရှိလို့ ဖြစ်တတ် တယ်။ လူပျို ဝင်၊ အပျို ဖြစ်ဆို တဲ့ အရွယ် ရောက်ချိန် မှာ ကိုယ်ခန္ဓာ အချိုး အစား ပြောင်းလာ လို့ လည်း ဖြစ်ရ ပါတယ်။ လူပျို ဖြစ်ပြီး နောက် ( မာစတာ ဘေးရှင်း ) လုပ်တတ် တဲ့ အရွယ် မို့ ဒူး နေရာ အကြောတွေ ပြတ်တာ ရင် ဒီ အလေ့ ကြောင့်လို့ ပြောင် ချင်ကြ တယ်။
Collagen ( ကိုလာဂျင် ) တွေ ပုံမှန် မဟုတ် ဖြစ်လာ လို့၊ အရေပြား ရဲ့ အလည် ထပ် Dermis မှာ သွား ဖြစ် ပါတယ်။ Glucocorticoid ဟော်မုန်း နဲ့ ဆိုင်သေး တယ်။ လူမဲ တွေ မှာ အဖြစ် နည်း တယ်။ မျိုးရိုး လိုက်တာ လည်း ရှိတယ်။ အမေ ဖြစ်ရင် သမီး တွေမှာ အဖြစ် များ လို့ မိန်းမ မယူ ခင် သူ့အမေ ကိုပါ လေ့လာ သင့် တယ်။ ဈေး အကြီးဆုံး မော်ဒယ် ၁ဝ ယောက် စာရင်း ဝင် သြစတြေးလျ က Miranda Kerr ကလေး ယူတော့ မယ် ဆိုတော့ သူ့ အဖွါးက ပြောတယ် "ခါးရ် မိသားစု မှာ ဗိုက်ကြော ပြတ် တဲ့ ရာဇဝင် မရှိဘူး" တဲ့။
ဘယ်လို ကုရမလဲ ဆိုတာ “ပြော ရမှာ တော့ ဝမ်းနည်း ပါတယ်။” ( ဒီ စကား အသုံး အနှုံး က I am sorry to tell you ကို တိုက်ရိုက် ဘာသာ ပြန် ပြော တာပါ။ နောက်ပေါ် အသုံး အနှုံး တခုပါ။ ဒီလို ပါဘဲ နုတ်ဆက် ရင် “မင်္ဂလာပါ” လို့ ပြောလာ နေ ကြတယ်။ မူလ ပဋိ သန္ဓာရ စကားက “နေကောင်း လား” “ထမင်း စားပြီး ပြီလား” မျိုး သာ ဖြစ်ပါ တယ်။ Good morning ကို ဘာသာ ပြန်ရာ ကနေ အခုတော့ ယဉ်ကျေး တဲ့ နုတ်ခွန်း ဆက် တခု လိုလို ဖြစ်လာ တယ်။ ကိုယ့် စကား ကိုယ် အား မရ တာလား။ ဗိုလ် ဆန်ချင် တာလား တော့ မသိ ဘူး။ )
ကြော်ညာ ပြီး ရောင်းတဲ့ ( ခရင်မ် ) တွေက လက်တွေ့ မှာ တကယ် ကောင်းတယ် လို့ အာမ မခံ နိုင်ပါ။ အကြော ပြတ်တာ ဖြစ် စေတဲ့ အခံ ရောဂါ ရှိရင် ကုသ ဘို့ လိုတယ်။ မဖြစ် အောင် ကာကွယ် ဘို့ လိုမယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုယ် ခန္ဓာ အလေးချိန် ကို အပြောင်း အလဲ မမြန်အောင် သတိ ထား ရမယ်။ ကော်တီဇုံး ဆေးတွေ သိပ် လိုအပ် မှ သာ သုံးပါ။ ကိုယ်ဝန် ဆောင် နေတုံး မှာ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ။ ဆီးချို ရှိ - မရှိ စစ်ပါ၊ ကုပါ။ ဟော်မုန်း ပါ ဆေးတွေ ကို သတိ ထားပါ။
အကြော ပြတ်တာ က အမာရွတ် သဘော နဲ့ တူတယ်။ အမာရွတ် ဆိုတာ မျိုး က ပျောက် သွားအောင် လုပ် လို့ မရ သလောက် ပါ။ အနာ - ဒဏ်ရာ ဖြစ်တုံး က အရေပြား ကို ဘယ်လောက် ထိ နက် သွားခဲ့ သလဲ အပေါ် မှာ မူတည် ပြီး အကြီး - အသေး၊ အပျောက် နှေး - မြန် ကွာ တယ်။ ဖြစ်တဲ့ နေရာ အရ လည်း မတူ ကြ သလို၊ လူ အပေါ်မှာ ပါ တည်သေး တယ်။ အသား အရေ ကောင်းသူ၊ အရွယ် ငယ်ငယ် မှာ အပေါ်ယံ ဖြစ်တဲ့ အမာရွတ် ဆိုရင် ကြာ လေလေ ပျောက် လေလေ။
စိတ်ဓါတ် မကျ ပါနဲ့အုံး။ သုတေသန တခု က Gotu kola, Vitamin E, Collagen hydrolysates တွေ က အကြောပြတ် တာ အတွက် အကျိုး ရှိတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ Gotu kola ဆိုတာ တခြား မဟုတ်ဘူး မြင်းခွါရွက် ပါ။ Collagen hydrolysates ဆိုတာ က လည်း Shampoos, Conditioners, Soaps, Face cares, Make - up လူသုံး ပစ္စည်း တွေ မှာ ပါတဲ့ ဓါတ်ပါဘဲ။ ဗီတာမင် E ကို စာ တပုဒ် ရေးထား ပါတယ်။
နောက် သုတေသန တခု က Vitamin E, Panthenol, Hyaluronic acid, Elastin နဲ့ Menthol တွေပါတဲ့ ( Verum ) Cream က ကောင်းတယ် လို့ ဆိုတယ်။ Cocoa butter ဆိုတာ ကလည်း ရေငွေ့ ပေးတာ မို့ ကောင်းတယ် ပြော တယ်။ သုတေ သန တော့ မရှိသေး ဘူး။
Dermatologic Surgery ဂျာနယ် က Radiofrequency combined with 585 - nm pulsed dye laser နဲ့ ၃၇ ယောက် ကို ကုတာ၊ ၃၃ ယောက် မှာ အလွန် ကောင်း တဲ့ ရလဒ် ရတယ် လို့ ဆိုပါ တယ်။ Tummy tuck ခေါ် တဲ့ ခွဲစိတ် ဖယ်ရှား မှု လည်း လုပ်ကြ တယ်။ Fractional laser resurfacing ( လေဆာ ) နည်းသစ် က လည်း ပိုကောင်း သတဲ့။
Dermatological Treatment ဂျာနယ် “Treatment of striae distensae withaTriPollar radiofrequency device: A pilot study" စာတမ်း မှာ အမျိုး သမီး ၁၇ ယောက် ကို ၆ ပါတ် ကုသ ပေး တာ ဆေးပါတ် ပြည့် ပြီး နောက် ၁ ပါတ် မှာ ၃၈့၂ % က ၂၅့၅ % နဲ့ ၁၁့၈ % က ၅၁့၇၅ % တိုးတက်မှု တွေ့ရ တယ်။ ၂၃ % က ကျေနပ် ကြပြီး၊ ၁၂ % ကတော့ ကျေနပ်မှု မရှိဘူး ဆို ပါတယ်။
“အကြော ပြတ်တာ ကျန်းမာရေး ပြဿနာ” လို့ ရေးခဲ့ ပါတယ်။ လူ ဆိုတာ မွေးတုံး ကထက် ဖြစ်နိုင် ရင် ပိုလှ ချင်၊ ပိုကောင်း ချင်၊ ပို ကျန်းမာ သန်စွမ်း ချင် ကြတယ်။ လျော့ သွား၊ ကျ သွား၊ ပြောင်း သွားရင် လည်း နဂို အနေ ပြန် ဖြစ်ချင် ကြတယ်။ ဒီ အထိ တော့ ( နော်မယ် ) ပါ။ မဖြစ် နိုင်ဘူး ဆိုတာ ကို ပါ ဖြစ်ချင် နေရင် တော့ ဝေဒနာ တိုးတာ ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကံနဲ့ စိတ် ဟာ အကြောင်း တရား တွေထဲ မှာ ပါနေ တာပေါ့။ အဲဒါ ကြောင့် လည်း စိတ် ကို ထားတတ် အောင် ပြုပြင် နည်းတွေ၊ ကံ တရား ကောင်း အောင် ကျင့်ကြံ စရာ တွေ ပေါ်ပေါက် လာခဲ့တယ်။
ကောင်းခြင်း ငါးဖြာ ထဲမှာ ဆံပင်၊ အသား၊ အရိုး၊ အရွယ် နဲ့ အတူ အရေ ၏ ကောင်းခြင်း လည်း ပါတယ်။ အမျိုး သမီး တွေ သာမက အမျိုးသား တွေ အတွက် လည်း ဗိုက်စူ၊ ဗိုက်ပူ တွေ မဖြစ်ချင် ကြတာမို့ “ဗိုက်ခေါက် ကျန်းမာရေး” က အတော် အရေး ပါလှ တယ်။ ဗိုက်ကြော ပြတ်တာ က အရေပြား မှာ ဖြစ်တာ ပါ။ အရေပြား အောက်မှာ အဆီ ပြင်၊ ကြွက်သား၊ နောက်ခံ အရွတ် ပြား၊ အတွင်းဆုံး ကြမှ ဗိုက်ကို ဖုံးနေ တဲ့ အလွှာ ဆိုပြီး ၅ ထပ် ရှိတယ်။ ဗိုက် မစူ ချင်ရင် ဗိုက် လှ ချင်ရင် အရေပြား လှ ရမယ်။ အဆီ မထူ ရဘူး။ ( ဗယ်လီ ) ခေါ်တဲ့ ဗိုက် ကြွက်သား သန် နေရမယ်။ တချို့ သိပ် မသိကြ တာက အရွတ်ပြား ရဲ့ အရေးပါ မှု ဘဲ။ ဗိုက် ကို ခွဲစိတ် ရရင် ဒီ အထပ် ကို ကျကျ နန ပြန်ချုပ် ပေးရတာ လက်ဝင် တဲ့ အလုပ် တခုပေါ့။
လူ တယောက် ကို ကြည့်တာ နဲ့ ဗီတာမင် ဘီ ၂ နည်း နေတာ ကို သိနိုင် တယ်။ ပါးစပ် ဘေး စွန်း တွေ မှာ အရောင် ဖျော့နေ၊ နီနေ။ အနာ ဖြစ်ချင် နေတာ မြင်ရ မယ်။ ဆက်သိ ဘို့က သူ့မှာ ဘီ ၂ နည်း နေရင် ဘီ ၁ လည်း နည်း နေနိုင် သလို၊ တခြား တခြား အာဟာရ တွေ ပါ နည်း နိုင်တယ် လို့ မှန်းတတ် ရတယ်။ ဒီ ဆင်ခြင်မှု သဘော အတိုင်း ဘဲ ဗိုက် ကြောပြတ်သူ တယောက် မှာ အရေ ပြား အောက်လွှာ တွေ လည်း တခုခု လို နေနိုင် တယ် လို့ သံသယ ဝင်ဘို့ ထိုက် တယ်။
ရေနဲ့ အာဟာရ ဓါတ် ပြည့်ဝ နေတဲ့ အရေပြား ဆိုရင် အကြော ပြတ်တာ ဟာ အဖြစ် နည်းတယ်။ ရေသောက် မနည်း စေနဲ့။ မျှတ တဲ့ အစား အစာ စားပါ။ အသား - ငါး၊ အသီး အရွက် - အသီး အနှံ၊ ပဲတွေ စုံအောင် စားရတာ မျိုး ပြောတာပါ။ လှုပ်ရှား ရုံးကန် နိုင်ဘို့ Energy အား ဖြစ်စေတဲ့ အစာ၊ ကြီးထွား ဘို့၊ ပျက်တာ တွေ ပြုပြင် ဘို့ Protein ( ပရိုတင်း )၊ နည်းနည်း စီ နဲ့ နေ့တိုင်း မပါ မဖြစ်တာ တွေ က ဆီ၊ ဗီတာမင် တွေ နဲ့ ဓါတ်ဆား တွေ ဖြစ်တယ်။ ဗီတာမင် A နဲ့ E ကို သောက်သင့် တယ်။ သူ နည်းနေ ရင် ပြော့ ဖတ်ဖတ် ဖြစ် နေတာမို့ ( ပိုတက် ဆီယံ ) ပါ ဖြည့်ပေး ဘို့ လိုတယ်။ အကြော ပြတ်ပြီး သူတွေ အတွက်ပါ ကောင်း ပါတယ်။
ဗိုက်ကြော ပြတ်တာ အတွက် ရေဓါတ်၊ အာဟာရ ဓါတ် နဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ အလေး ထားပြီး သကာလ၊ မအိုသေး သမျှ အပျိုလေး လို လှနေ ကြပါစေ။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေမှာ အောက်ခြေအဆင့် တပ်ဖွဲ့ဝင် ပါဝင်ပတ်သက်ဟု ကေအန်ယူ ပြော
Posted by drmyochit Sunday, October 20, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
လတ်တေလာ ဗုံးပေါက်ကွဲတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေမှာ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကေအန်ယူက အောက်ခြေ အဆင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ ပါဝင်ပတ် သက်နေတယ် လို့ ကေအန်ယူက ပြောဆို လိုက်ပါ တယ်။
ရန်ကုန်မြို့ ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက် တနင်္ဂနွေန့က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကေအန်ယူရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ကေအန်ယူ ဗဟိုဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်က အခုလို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
“သူက မြို့နယ်အဆင့်မှာပဲ ရှိတယ်။ အောက်ခြေရဲ့ စီးပွားရေး တာဝန်ခံ။ ကေအန်ယူဗဟိုရဲ့ စီးပွားရေး တာဝန်ခံမဟုတ်ဘူး။ ဒေသဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းလေးတခုရဲ့ စီးပွားရေးတာဝန်ခံဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ရှေ့တန်းရောက်မှုကြောင့် စီးပွားရေးသမား နိုင်ငံရေးသမားတွေ နောက်ကွယ်က စီစဉ်ညွှန်ကြားမှုတွေကြာင့်လို့ လေ့လာသုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒါကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီး ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းက ရန်ကုန်၊ မန္တေလး၊ စစ်ကိုင်း၊ တောင်ငူနဲ့ ရှမ်းပြည်နယ် နမ့်ခမ်းမြို့တွေမှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနဲ့ ဗုံးတွေ့ရှိမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နြေပီး သေဆုံးဒဏ်ရာရရှိမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
စွယ်စုံသုံး အင်တာနက် ကွန်နရှင်နဲ့ PC ရဲ့ Speed ကိုမြှင့်တင်ပေးမယ့် Auslogics BoostSpeed v6.3.0.0 + Crack
Posted by drmyochit Sunday, October 20, 2013, under နည်းပညာ | No comments
Auslogics BoostSpeed ဆိုတဲ့ စွယ်စုံသုံး Maintenance Tool ကိုတော့ တော်တော် များများ ရင်းနှီးကြ မယ်လို့ ထင်ပါတယ်ဗျာ။ မိမိရဲ့ ကွန်ပြူတာအတွက် အသုံးတည့်စေမယ့် Tools ပေါင်း 13မျိုး အထက်ပါ ၀င်ပါ တယ်ဗျာ။ Disk Defrag , Internet Optimizer , Tweak Manager , Duplicate File Finder , File Shredder , Disk Wiper , Startup Manager , Uninstall Manager , Service Manager , Task Manager , System Information , Rescue Center , Browser Manager စတဲ့ Tools တွေပါဝင်ပါတယ်။ ရင်းနှီးပြီးသားကတော့ အပေါ်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ Feature တွေကိသိနိုင်ပါတယ်။ မသိသေးသူများအတွက်လည်း Tools တစ်ခုချင်းရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်အသေး စိတ်ကိုရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။
The program will clean up, speed up and fix your slow
computer to make it run as fast and stable as new.
Disk cleanup is considered to be one of the most important aspects of computer maintenance, because Windows accumulates unnecessary temporary files and other clutter that severely affects computer performance.
Disk Defragmentation & Optimization
Disk fragmentation isaphenomenon that usually occurs either when Windows fills fragmented empty space withanewly created file and splitsafile to fit the bits of free space, or whenafile grows and requires more space. This is how free space fragmentation eventually causes file fragmentation.
The registry is the core database of the Windows operating system. It stores and manages settings for all hardware, operating system software, all other applications, and user settings. The registry is altered every time software is installed or uninstalled, as well as when settings are being configured. These constant changes cause the registry to grow in size and deleting entries inevitably leads to registry fragmentation. Asaresult the registry loses its linear structure, which leads to increased registry access and application response time.
When it comes to Internet connection settings, most Windows-based computers use general presets that are not optimized for any particular connection type. This means thatalot of computer users' actual download/upload speed is significantly lower than the one offered by their ISPs.
Deleting important files by accident isacommon enough mistake. Fortunately, it is possible to recover deleted files. Typically, files deleted by user, lost because ofahardware failure oravirus attack are not completely erased immediately.
Auslogics BoostSpeed6hasabrand new interface that allows you to jump straight in, selecting the desired actions. Your current system state is displayed in the main window. All major tasks, such as removing junk files, defragmenting disks and repairing registry errors can be done with justacouple of mouse clicks. You can also switch to additional tabs with optimization advice, resources usage information and advanced tools for even more control over your system.
If you have accidentally deleted an important document orapicture - don't panic! Auslogics BoostSpeed6is supplied with the File Recovery tool. This program will recover accidentally deleted files or files deleted by virus attacks and software faults. Auslogics File Recovery has the ability to preview photos and even documents while browsing through the list of found files. This feature will help you to recover exactly what you need.
This tool checks your hard drives for problems related to bad sectors, lost clusters and directory errors. With Disk Doctor you will be able to recover data from unreadable sectors and monitor your hard drive health. We highly recommend running this tool at least onceamonth. If you start seeing lots of bad sectors, it is better to makeabackup copy of your important files and consider gettinganew hard drive. This will save your data from being lost.
Auslogics Disk Explorer is designed to help you track disk space usage. It will display an intuitive and easy to understand pie chart, that will show you the largest files and folders on your disks. By using Disk Explorer you can easily and quickly free up additional space on your disk when needed. Just select the "Top 100 files" list to see which files are taking up the most of your hard drive space and save them toaCD, DVD, or removable drive.
What's new in v6.3.0.0
corrected all known bugs
made numerous improvements to all program modules
Posted by drmyochit Sunday, October 20, 2013, under တွေ့ဆုံမေးမြန်း | No comments
အဆွေးသီချင်းများကို ခံစားချက်အပြည့်ဖြင့် သီဆိုလေ့ရှိသူ သရုပ်ဆောင်တေးသံရှင် ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းနှင့် တွေ့ဆုံ၍ မကြာခင် ထွက်ရှိတော့မည့် ၄င်း၏ တတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော် အာဘွားစီးရီး အကြောင်း၊ မင်္ဂလာသတင်းအကြောင်းနှင့် အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများ အကြောင်းကို The Voice က မေးမြန်းထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Voice : ဒုတိယစီးရီး မျက်လှည့်နဲ့ အခု အာဘွားနဲ့ဆို ကြားထဲမှာ အချိန် ဘယ်လောက်ကွာလဲ။
WSKT : ဝိုင်းစုက စီးရီးတွေထွက်ရင် စီဒီကိုတစ်နှစ်၊ VCD ကို တစ်နှစ် အဲဒီလို ခြားပြီး ထွက်တာဆိုတော့ တစ်နှစ်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
Voice : ဒီ အာဘွားစီးရီးမှာက ကော်ပီနဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဘယ်နှပုဒ်စီပါလဲ။
WSKT : ဝိုင်းစု ဒီအာဘွားစီးရီးထဲမှာ တော့ တစ်ခွေလုံး ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေချည်း ထည့်ထားပါတယ်။
Voice : ဝိုင်းစုရဲ့ သီချင်းတွေက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်တွေ
များတယ်နော်။ အဲဒီ ကျတော့ ဘယ်လိုစိတ်ကူးနဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် တွေကို လုပ်ဖြစ်တာလဲ။
WSKT : ဝိုင်းစုက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းတွေဆိုတာ များတယ်။ အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ စီးရီးတွေမှာလည်း ကော်ပီသီချင်းက တစ်ပုဒ်စီလောက်ပဲ ပါတာ။ အကုန်လုံး Own Tune တွေချည်းပဲ။ နောက်အတွဲခွေ တွေမှာလည်း ဝိုင်းစု ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတွေ ဆိုတာများပါတယ်။ ဒီ အာဘွားခွေကို လည်း Own Tune တွေချည်း သီးသန့်လုပ်မယ်လို့ စီစဉ်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေမယ်ဆို ကော်ပီသီချင်း တွေလည်း ဆိုပါတယ်။
Voice : ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းတွေ ပိုဆိုဖြစ်တာက ကိုယ့်ရဲ့ Creation တွေ ထည့်ပြီး ဆိုရတာကို ကြိုက်လို့လား။ ကော်ပီ ဆိုရတာနဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် ဆိုရတာ ဝိုင်းစု အတွက် ခံစားမှု ဘယ်လိုကွာခြားလဲ။
WSKT : ကော်ပီသီချင်းတွေ ကကျတော့ စည်းတွေ၊ ဘောင်တွေရှိတယ်၊ မူရင်း သီချင်းပုံစံ မပျောက်အောင် ဆိုရတယ်။ ကိုယ့်ပုံစံဖြစ်အောင် ပြောင်းဆိုလို့ သိပ်မရဘူး ပေါ့နော်။ အဲဒါကို ဝိုင်းစုမကြိုက်ဘူး။ ဘယ်သီချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အတီးကအစ ဒီပုံစံပဲ။ ညည်းရင်လည်း သူ့မူရင်း အဆိုတော်ရဲ့ Flow အတိုင်းပဲ ဆိုကြတာများတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးက ဝိုင်းစုနဲ့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ ဝိုင်းစုက ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံ ဆိုရတာ ပိုကြိုက်တယ်။
Voice : ဝိုင်းစုရဲ့ စီးရီးတွေမှာ သီချင်း ရေးပေးတဲ့ တေးရေးဆရာတွေက သိပ်မပြောင်းဘူးနော်။ အဲဒီလို တေးရေးဆရာ တွေကို ပုံသေထားပြီး လက်တွဲ အလုပ်လုပ်တာက ကိုယ့်အတွက် ဘယ်လိုအကျိုး ကျေးဇူးတွေ ရစေလဲ။
WSKT : သူတို့က ဝိုင်းစုနဲ့ ဘယ်လို သီချင်းပုံစံက လိုက်တယ်။ ဘယ်လိုမျိုးဆို ပိုပြီး အဆင်ပြေတယ် ဆိုတာ သိသွားတာ ပေါ့နော်။ အဲဒီအခါကျတော့ ကိုယ်က သိပ်ပြီး ထွေထွေထူးထူး ပြောပြစရာမလို ဘူးပေါ့။ ဝိုင်းစု ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေး လိုချင်တယ်လို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ သူတို့က ချက်ချင်း သိတယ်။
Voice : အာဘွားစီးရီးမှာ ပါတဲ့ တေးရေးဆရာတွေကို ပြောပြပေးပါဦး။
WSKT : ဒီ အာဘွားစီးရီးမှာ သီချင်း အားလုံး ၁၂ ပုဒ်ပါပါတယ်။ တေးရေးဆရာ တွေက ရွှေဂျော်ဂျော်၊ ဆောင်းဦးလှိုင်၊ ဇဝါ၊ ဖိုးကာ၊ စံပီး၊ မိုးမိုးနဲ့ ညီမင်းခိုင်ပါတယ်။
Voice : အာဘွားစီးရီးမှာ ဝိုင်းစုဆိုနေ ကျမဟုတ်တဲ့ သီချင်းပုံစံမျိုးတွေ ပါသေးလား။
WSKT : ဒီခွေမှာ ဝိုင်းစုသီချင်းပုံစံတွေ အရမ်းကြီး ပြောင်းဆိုထားတာ မရှိဘူး။ ဒီထဲမှာပါတဲ့ Sweet 16 ဆိုတဲ့ သီချင်း တစ်ပုဒ်ကတော့ ဝိုင်းစုဆိုနေကျ ပုံစံမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတစ်ပုဒ်တော့ ထူးထူးခြားခြား ထည့်ထားတယ်။
Voice : ဝိုင်းစုက သီချင်းအေးအေးလေးတွေ ဆိုတာ များပြီး သီချင်းအမြူးတွေ ဆိုတာ နည်းတယ်နော်။ အဲဒါကျတော့ ဘာကြောင့်လဲ။
WSKT : ဝိုင်းစု သီချင်းအမြူးတွေ ဆိုပါတယ်။ ဝိုင်းစုရဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ များသောအားဖြင့် သီချင်း အေးအေးလေးတွေ၊ အဆွေးသီချင်းလေးတွေ ပိုကြိုက်ကြ တာပေါ့နော်။ သီချင်းအမြူးတွေ ဆိုတယ် ဆိုပေမယ့်လည်း “မက်လောက်စရာ” တို့၊ “ရုပ်ဆိုးမတို့” တို့လို အရမ်းကြီး မမြူးတဲ့ သီချင်းမျိုးတွေ ဆိုတာ များတယ်။
Voice : ဝိုင်းစုကိုယ်တိုင် ကရော အဆွေးသီချင်း ဆိုရတာ ပိုကြိုက်လား။
WSKT : အဆွေးသီချင်းတွေ ဝိုင်းစု ကြိုက်ပါတယ်။ ဆိုသမျှသီချင်းတွေ အကုန်လုံး ကတော့ ဝိုင်းစုကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေပဲ။ ပရိသတ်တွေ ထဲကတော့ အဆွေးသီချင်း ကြိုက်တဲ့သူနဲ့၊ သီချင်းအမြူး ကြိုက်တဲ့သူတွေ ဆိုပြီး ကွဲသွားတာပေါ့။
Voice : ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် စီးရီးတစ်ခွေ လုပ်ဖို့အတွက် သီချင်းစုရတာ ခက်ခဲတယ်လို့ တေးသံရှင် တော်တော်များများက ပြောကြတယ်။ ဝိုင်းစုအတွက်ရော ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ကြုံခဲ့ရလဲ။
WSKT : ဝိုင်းစုက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းတွေ ဆိုတာများတော့ ဝိုင်းစုအတွက်တော့ သိပ်အခက်အခဲ မရှိပါဘူး။ ဒါကလည်း ဝိုင်းစုရဲ့ ပထမဆုံးစီးရီး “မက်လောက်စရာ” မှာဆို ကိုရွှေဂျော်ဂျော်က ကြီးကြပ်ပေးတယ်။ မျက်လှည့်နဲ့ အခုအာဘွားစီးရီးမှာတော့ ကိုဇဝါက ကူညီပေးတယ်။ ဝိုင်းစု နားမလည်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာဆို ကိုဇဝါက ဘယ်နေရာလေးမှာ ဘယ်လို ဆိုလိုက်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုတာ ပြောပြတယ်။ အဲဒီအခါ ကျတော့ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက် တွေကိုလည်း ပိုသိရတာပေါ့နော်။
Voice : ဝိုင်းစုက စီးရီးအတွက် သီချင်းတွေအပ်ရင် ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေ ပြောပြပြီး အပ်လေ့ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ဒီစီးရီးထဲမှာရော တေးရေးဆရာ တွေကို ကိုယ်က အကြောင်းအရာပြောပြပြီး ရေးပေးခိုင်းတဲ့ သီချင်း ဘယ်နှပုဒ်ပါလဲ။
WSKT : ဝိုင်းစုရဲ့ခံစားချက်ကို ပြောပြတယ် ဆိုတာထက် အဓိကကတော့ သီချင်း ပုံစံမထပ်အောင် ပြောပြတာပါ။ အဆွေး သီချင်းတော့ အဆွေးသီချင်းပဲ။ ဒါပေမဲ့ အကြောင်းအရာ မတူအောင် အပ်ရတာပေါ့။ ဒီခွေမှာလည်း ဝိုင်းစုက အဆွေးသီချင်းတွေ ဆိုခဲ့ပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် စာသားတွေ မတူအောင်၊ အကြောင်းအရာပိုင်း မတူအောင် နည်းနည်းပါးပါးတော့ ပြောပြရ တာပေါ့နော်။ ဒီခွေထဲမှာ တေးရေးဆရာကို ဝိုင်းစု သေချာအတိအကျ ပြောပြီး အပ်ထားတာ ဆိုရင်တော့ “နောက်ဆုံးအချစ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ဝိုင်းစု ဒီအခွေ စလုပ်ကတည်းက သေချာပြောပြီး အပ်ထားတယ်။ နောက် “အာဘွား” သီချင်းဆိုလည်း ဝိုင်းစုစီးရီး Title ပေးချင်တဲ့အတွက် သေချာပြောပြီး အပ်ထားတယ်။
ဝိုင်းစုက ခရီးတစ်ခုသွားလို့ လမ်းမှာ ဘယ်သူ့သီချင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် နားထောင်မိလို့၊ အကြောင်းအရာပိုင်း ကောင်းတယ်ဆိုရင် ဒီသီချင်းလေးကို အကြမ်းဖျင်းယူပြီး တေးရေးဆရာ တွေကို ပြန်ပြောပြပြီး အပ်ဖြစ်တယ်။
Voice : ဝိုင်းစုကိုယ်တိုင် တေးရေးဆရာကို သေချာပြောပြီး အပ်ထားတဲ့ “အာဘွား” နဲ့ “နောက်ဆုံးအချစ်” သီချင်းတွေက ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကို ရေးဖွဲ့ထားတာလဲ။
WSKT : “အာဘွား” သီချင်းကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မိဘတွေကို ကိုယ့်ကို ချစ်လို့ “အာဘွား” ခဏခဏပေးတယ်၊ ကြီးလာတော့ ချစ်သူက အာဘွား ပေးတယ်ပေါ့။ အဲဒီလို ပုံစံမျိုးလေးပါ။ နောက်ဆုံး အချစ်သီချင်းကတော့ ခွေထွက်လာတဲ့အခါမှာ နားထောင်ကြည့်ပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Voice : ဝိုင်းစုရဲ့ချစ်သူနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီမှာ မင်္ဂလာပွဲ ဆင်နွှဲမယ်လို့ သတင်းတွေ ထွက်နေတယ်နော်။
WSKT : ဝိုင်းစုကတော့ သေချာကျိန်းသေပြီ ဆိုတော့မှပဲ ဖြေချင်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ ကိုလည်း ဝိုင်းစု လိမ်မထားပါဘူး။ လောလောဆယ်တော့ အာဘွားစီးရီး ထွက်ဖို့ အတွက်ကိုပဲ ဝိုင်းစု အာရုံစိုက်နေပါတယ်။
Voice : ချစ်သူနဲ့အတူ အမေရိကမှာ ရှိုးတွေစီစဉ်ပြီး လုပ်ဖြစ်နေတော့ ဝိုင်းစုရဲ့ ချစ်သူက ဂီတကို စိတ်ဝင်စားလား။ ဝိုင်းစုရဲ့ စီးရီးအတွက် အကြံဉာဏ်တွေ ပေးတာမျိုး ရှိလား။
WSKT : အဲဒီလိုမျိုးတော့ သူက ဘာမှ ထဲထဲဝင်ဝင် ဝင်မပြောပါဘူး။ သူက ဝိုင်းစုနဲ့ မကြိုက်ခင် ကတည်းက ဂီတကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ သူ့ဟာသူလည်း အမေရိကမှာ အရင်ကတည်းက ရှိုးပွဲတွေ ဘာတွေလုပ်တယ်။ ဝိုင်းစုရဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာကိစ္စမှ သူဝင်မပါတတ်ဘူး။
Voice : အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင် ကျတော့ ချစ်သူနဲ့အတူ အမေရိကမှာပဲ အခြေချနေထိုင် သွားမှာလား။
WSKT : အဲဒါတော့ ဝိုင်းစုသေချာ မဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး။ ဟိုနဲ့ ဒီနဲ့ သွားလိုက် လာလိုက်ပဲ ဖြစ်မှာပါ။ ဝိုင်းစုက တစ်ဦးတည်းသော သမီး ဖြစ်တဲ့အတွက် အမေကြီးကို ဒီမှာတစ်ယောက်တည်း ထားခဲ့ပြီး အမေရိကမှာ အပြီးသွားနေဖို့တော့ မဖြစ်လောက်ဘူး ထင်တယ်။
Voice : ဝိုင်းစုက အခုနောက်ပိုင်း ဇာတ်ကားတွေ သိပ်မရိုက်ဖြစ်ပေမယ့် ထွက်လာသမျှ ဇာတ်ကားတွေက ပရိသတ်အကြိုက် ကားလေးတွေ များတယ်နော်။ အဲဒါ ကျတော့ ဇာတ်ကားတွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ် လက်ခံဖြစ်လဲ။
WSKT : အဲဒီလိုမျိုး ဇာတ်လမ်းတွေ ရွေးပြီး လက်ခံဖို့တော့ မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ ဝိုင်းစုကို လာငှားတဲ့ကား၊ လာပြောတဲ့ကား တွေထဲက ကိုယ်ကြိုက်တာကို ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့။ အဓိကက ကိုယ့်အတွက် လုပ်ကွက်ရမယ့်၊ ပရိသတ်ကြိုက်နိုင်မယ့် ကားမျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး ရိုက်ဖြစ်တာပါ။ ကိုယ်ရိုက်လိုက်တဲ့ ကားက မကောင်းဘူးဆိုရင် ဒီဘက်မှာ ကိုယ်က သီချင်းဆိုဖို့ရှိတာကို ဖျက်ပြီး လက်ခံထားတာမျိုးဆို အဆင်မပြေဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ဝိုင်းစုနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဇာတ်ကားမျိုးကို ရွေးချယ်ပြီး ရိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
Voice : အာဘွားစီးရီးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝိုင်းစုရဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပြောချင်တာရှိရင် ပြောပေးပါဦး။
WSKT : ဒီခွေလေးမှာလည်း ဝိုင်းစု တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားထားပါတယ်။ ဒီခွေလေးကိုလည်း အားပေးကြပါ ဦးလို့။ အရင်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ စီးရီးတွေကို အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
နန်းခင်ဇေယျာ ဦးဆောင်မယ့် နိုင်ငံခြား မယ်တွေနဲ့ မြန်မာဝတ်စုံ၊ သနပ်ခါး
Posted by drmyochit Sunday, October 20, 2013, under အနုပညာ | No comments
အခုဓာတ်ပုံထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံတွေ၊ မြန်မာ့သနပ်ခါးတွေတွေ့ရသူတွေကနန်းခင်ဇေယျာနဲ့ နိုင်ငံခြားသူ မယ်တချို့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု မယ်ပြိုင်ပွဲမှာ ပြန်လည်ဆန်းသစ်မှုရဲ့ အဖွင့်စာမျက်နှာကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူ ကတော့ နန်းခင်ဇေယျာပါဘဲ။
နန်းခင်ဇေယျာနဲ့ နိုင်ငံခြားသူ Miss တချို့၊ ဓာတ်ပုံ- နန်းခင်ဇေယျာ
နန်းခင်ဇေယျာဟာ တိုးရစ် ဂိုက်လည်း လုပ်သလို မနှစ်ကတော့ မြန်မာကိုယ်စားပြုပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပ တဲ့ Miss International ပြိုင်ပွဲမျာ အင်တာနက်ဆုအပါအ၀င် ဆုတွေရခဲ့လို့ အခုတော့ သူဟာ ကြေညာမင်းသမီး လည်း ဖြစ်လာ ပါတယ်။
တဖက်ကလည်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေသလို အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ် လာရောက် တဲ့ Miss တချို့ကို နန်းခင်ဇေယျာက တိုးရစ်ဂိုက်အနေနဲ့ လိုက်ပါ ပို့ဆောင် ရှင်းလင်းပြသဖို့ ရှိပါတယ်။
အခု မြင်ရတဲ့ ပုံထဲမှာတော့ နန်းခင်ဇေယျာအပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်ရောက်လာတဲ့ Miss တွေ ဟာ မြန်မာဝတ်စုံတွေ ၀တ်၊ မြန်မာ့သနပ်ခါးကိုလိမ်းပြီး မြန်မာဆိုတာဘာကို စတင် လေ့လာဖို့ အဆင်သင့်
ဖြစ်နေပုံကို နန်းခင်ဇေယျာက သူ့ ဖေ့စ်ဘုတ်က တဆင့် အသိပေးထားပါတယ်။
နန်းခင်ဇေယျာကတော့ နိုင်ငံခြားသူ Miss တွေကို မြန်မာ့ရိုးရာ ၀တ်စုံတွေ၊ မြန်မာ့သနပ်ခါးတွေနဲ့ မြန်မာဆို
တာ ကမ္ဘာက ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားအောင် ကြိုးစားမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
မန္တလေးမြို့တွင် လိုင်စင်မဲ့ ကားတစ်စီး စွန့်ပစ်ထားရာမှ ဖြစ်ခဲ့သော ဗုံးလန့်မှု အပါအ၀င် ဗုံးလန့်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်
(အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် နံနက်ပိုင်းက ကျွဲဆည်ကန် အဝေးပြေးကားဝင်းအတွင်း လိုင်စင်မဲ့ ကားတစ်စီး အား သက်ဆိုင်ရာမှ ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်နေစဉ်)
မန္တလေးမြို့၌ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်က ရွှေဘဲစားသောက်ဆိုင်တွင် ဗုံးတွေ့ရှိမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်တွင် လိုင်စင်မဲ့ကားတစ်စီး စွန့်ပစ်ထားရာမှ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုံးလန့်မှု အပါအ၀င် အများပြည်သူ သွားလာရာ နေရာများတွင် ဗုံးလန့်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် ညနေ ၄ နာရီ ၀န်းကျင်ခန့်က မန္တလေးမြို့ ၆၆ လမ်းမပေါ်ရှိ အမျိုးသားကဇာတ်ရုံ အနီးတွင် မသင်္ကာဖွယ်ရာ အထုပ်တစ်ထုပ် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖွင့်လှစ်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ဟန်းဖုန်းတစ်လုံးအား ဓာတ်ခဲဖြင့် ပူးတွဲချည်နှောင် ထားသည်ကိုသာ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယင်းနေ့ညပိုင်းတွင် ၂၃ လမ်း၊ ၈၃ လမ်းနှင့် ၈၄ လမ်းကြားရှိ အမှိုက်ပုံ တစ်ခုမှ မီးခိုးများ ထွက်ရှိလာသောကြောင့် သက်ဆိုင်ရာမှ သွားရောက်စစ်ဆေးရာ ဗြောက်အိုးဖောက်မှုကြောင့်သာဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတို့က အတည်ပြု ပေးခဲ့သည်။
သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ဖြစ်သည့် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်တွင်လည်း မန္တလေးမြို့ ကျွဲဆည်ကန် အဝေးပြေးကားဝင်း အတွင်း၌ မတ်ခ်တူးအမျိုးအစား လိုင်စင်မဲ့ ကားတစ်စီး လာရောက်စွန့်ပစ်ထားမှုကြောင့် သက်ဆိုင်ရာ ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ ၁၂ ဗို့အား ဘက်ထရီအိုး တစ်လုံး၊ ထီးတစ်ချောင်း၊ ရေသန့်ဘူး တစ်ဘူးနှင့် Red Label အမျိုးအစား အရက်ပုလင်း တစ်လုံးတို့ကိုသာ တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
"လက်ရှိအချိန်မှာ ဗုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထုက စိုးရိမ်နေတာကြောင့် ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ သက်ဆိုင်ရာကို အကြောင်းကြားကြလို့ ဒီလိုကောလာဟလတွေ ထွက်နေတာပါ။ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်း သတင်းရရချင်း ဗုံးဟုတ်၊ မဟုတ်ကို ကျန်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အတည်ပြု ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ ဒီလို အသိရှိရှိနဲ့ ပြည်သူက သတင်းပေးနေတာကလည်း လုံခြုံရေးအတွက် အကျိုးရှိပါတယ်" ဟု တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ဖြူး၊ တောင်ငူ၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် စစ်ကိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ၊ မပေါက်ကွဲသေးသည့် ဗုံးတွေ့ရှိမှုများ၏ ဖြစ်စဉ်များမှ ကျူးလွန်သူများနှင့် ဆက်စပ်ပါဝင်သူများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန် ခဲ့သော်လည်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် ဘားအံမြို့တို့တွင်မူ ဗုံးဟုမသင်္ကာဖွယ်ရာ ပစ္စည်းတွေ့ရှိမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
Samsung Galaxy S5 တွင် Eye Scanner ပါဝင်လာဖွယ်ရှိ
မကြာခင် ထွက်ရှိလာတော့မည်ဟု ဆိုနေကြသော Samsung Galaxy S5 တွင် Eye Scanning Sensor (ပိုင်ရှင်၏ မျက်ကြည်လွှာကို ဖတ်ရှုမည့် လုံခြုံရေးစနစ်) ပါဝင်လာမည်ဟု သိရသည်။
iPhone 5S တွင် Fingerprint Scanner ဟူ၍ စမတ်ဖုန်းလုံခြုံရေး စနစ်ကို တစ်ခေတ်ဆန်းစေခဲ့ပြီး HTC One Max တွင်လည်း Fingerprint Scanner ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်းတို့နှင့်အတူ တောင်ကိုရီးယားအခြေစိုက် Samsung ကလည်း ပိုမိုဆန်းပြားပြီး လူစိတ်ဝင်စားမှုရှိအောင် ဖန်တီးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
စမတ်ဖုန်း၏ Sensor မှ ဖုန်းအသုံးပြုသူ၏ မျက်လုံးကို Scan ဖတ်ပြီး ပိုင်ရှင်ဟုတ်/မဟုတ် ခွဲခြားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ Galaxy S5 တွင် Eye Scanner ပါဝင်လာမည်ဟုသာ သိရပြီး အဆိုပါ Sensor မည်သို့ မည်ပုံ အလုပ်လုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း မသိရသေးပေ။
ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်သော စမတ်ဖုန်းလောက၌ လုံခြုံရေးစနစ်အမျိုးမျိုးကို သူ့ထက်ငါ ထူးခြားဆန်းသစ် ကောင်းမွန်အောင် ဖန်တီးထုတ်လုပ်နေကြသလို ဖုန်းပုံစံကိုလည်း သာမန်ပုံစံများမှ ခွဲထွက်ပြီး အကွေးအကောက်များဖြင့် တီထွင်လာကြသည်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပင် ဖြစ်သည်။
အနာဂါတ်တွင်မူ စမတ်ဖုန်းအပါအ၀င် နည်းပညာပစ္စည်းများကို မည်သို့မည်ပုံ သုံးစွဲကြရမည် ဆိုသည်မှာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ၊ လေ့လာစရာ၊ နှစ်သက်စရာ ဖြစ်နေပါတော့သည်။
Kangyi (Myanmar Consumer Guide)
ကျပ်ငါးသိန်းနှင့် ရွှေလုပ်ကွက်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုပြီး ဗုံးဖောက်ခွဲစေခဲ့ဟု ရှင်းလင်း
နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများနှင့် ပြည်ပရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုများ ၀င်ရောက်မှု အဟန့်အတားဖြစ်စေရန် ကျပ်ငါးသိန်းနှင့် ရွှေလုပ်ကွက် ပေးမည်ဟု ပြောဆိုစေခိုင်း ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့က အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် ညနေ ၃ နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့ရုံး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
တောင်ငူ၊ ဖြူး၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ် များနှင့် မပေါက်ကွဲသေးဘဲ ဗုံးတွေ့ရှိခဲ့ရသည့် ဖြစ်စဉ်များကို KNU အဖွဲ့၏ စီးပွားရေး တာဝန်ခံအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသော နေတိုးဆိုသူက ဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ကျူးလွန်သူ စောမြင့်လွင်အား စစ်ဆေး ချက် အရ ပြန်လည်ထွက်ဆိုမှုကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် ရဲချုပ်ဇော်ဝင်းက ပြောကြားခဲ့ သည်။
ရန်ကုန်မြို့ အတွင်းရှိ နိုင်ငံခြားသားများ ၀င်ရောက်စားသောက် တည်းခိုလေ့ရှိသည့် WESTERN PARK RUBY စားသောက်ဆိုင်၊ ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်နှင့် ဖြူး၊ တောင်ငူဖြစ်စဉ်တို့တွင် ဗုံးဖောက်ခွဲရန် ငွေကျပ် ငါးသိန်းဖြင့် ခိုင်းစေခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများ အောင်မြင်ခဲ့ပါက ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတစ်ကွက်ကို ပေးဆောင်မည် ဟုလည်း နေတိုးက စောမြင့်လွင်ကို ပြောကြားထားခဲ့ကြောင်း ရဲစစ်ဆေးချက်အရ သိရသည်။
ထို့အပြင် နေတိုးက မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီးနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီးတို့တွင် ဗုံးဖောက်ခွဲမှု ဖြစ်စဉ် များကို ၎င်းကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း စစ်ဆေးချက်နှင့် အထောက်အထားများအရ သိရသည်။
”အဓိက ဒီဖြစ်စဉ်တွေ ကို ကျူးလွန်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ပြည်ပက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ ရပ်တန့်ဖို့ စစ်ဆေးချက်အရ သိရတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်တွေ မဖြစ်ခင်က ကြိုတင်သတင်းရရှိမှု လုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။
ဖမ်းမမိသေးတဲ့ နေတိုးကိုလည်း KNU အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်။ တိုင်းနဲ့ပြည်နယ် တစ်ခုချင်းစီက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုစည်းပြီးတော့ စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ အခါမှာတော့ ဒီကွင်းဆက်ကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့တာပါ” ဟု မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ် ရဲချုပ်ဇော်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
သူရိယအလင်းဂျာနယ်တိုက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ကိစ္စ နှစ်ဖက်ပြောကြားချက်ကွဲလွဲ
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၁၉- သူရိယအလင်း ဂျာနယ်တိုက်ကို ညအချိန်တွင်ဝင်ရောက် ခဲ့ပြီး ဖိုးလပြည့်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်၏သား ဦးသူရိန်တို့က ကွန်ပျူ တာများ ယူဆောင်သွားကြကြောင်း ဂျာနယ် စီအီးအို ဦးမိုးဟိန်းပြောကြားခဲ့သော်လည်း တစ်ဖက်တွင် ကာယကံရှင်များက အဆိုပါပြောကြားချက်အပေါ် မဟုတ်မှန်ကြောင်း ဖလားဝါးနယူးစ်သို့ ပြောသည်။ သူရိယအလင်းဂျာနယ် စီအီးအို ဦးမိုးဟိန်းက ''အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် ည ၁၂ နာရီနဲ့ ၁နာရီကြားမှာ စီးပွားကူးသန်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်သား ဦးသူ ရိန်နဲ့ အပေါင်းအပါ ၁၅ ဦးလောက်က ကျွန် တော်တို့ရုံးကို လာရောက်ပြီး တံခါးဖွင့်ခိုင်း ကာ ရုံးထဲမှ ကွန်ပျူတာ ၁၄လုံးနဲ့ စီစီတီဗွီတွေ ကို ထိန်းချုပ်တဲ့ မိန်းဆာဗာကိုပါ ဖြုတ်ယူ သွားတာပါ''ဟု ပြောသည်။
သို့ရာတွင် ယင်းဖြစ်ရပ်တွင် ဖိုးလ ပြည့်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့်၏ သား ဦးသူရိန်တို့ ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိ ကြောင်းနှင့် ယင်းဖြစ်စဉ်တွင် ဂျာနယ်တိုက် ပိုင်ရှင်နှင့် ထုတ်ဝေသူဖြစ်သူ ဦးယုနိုင်ကိုယ် တိုင် ဝင်ရောက်ယူဆောင်ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ကာယကံရှင်များက ဖလားဝါးနယူးစ်ဂျာနယ် ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အား ပြန်လည် ဖြေကြားသည်။
အောက်တိုဘာ ၁၉ရက် ည၁၂ နာရီဝန်းကျင်တွင် သူရိယအလင်းဂျာနယ် တိုက်သို့ ဖိုးလပြည့်နှင့် ကိုသူရိန်တို့မှ လူအင် အား၁၅ယောက်ခန့်ဖြင့် လာရောက်၍ ရုံး အတွင်းရှိ ကွန်ပျူတာများကို ဖြုတ်ယူဆောင် သွားသည်ဆိုပြီး သူရိယအလင်းဂျာနယ်၏ စီအီးအိုဦးမိုးဟိန်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွင် ပြောသည်။
ဦးနေရွှေသွေးအောင်(ခ)ဖိုးလ ပြည့်က ''ညကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်မှာ ကျွန်တော့် အနေနဲ့ လုံးဝပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ ဘူး။ ကျွန်တော် သူတို့နဲ့လိုက်လဲမသွားဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ညက သူရိယအလင်းထုတ်ဝေ သူ ဦးယုနိုင်မွေးနေ့မှာ ကိုသူရိန်နဲ့တွေ့လို့ မင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေ တအားများ နေတယ်။ မကောင်းဘူးနော်လို့ ပြောခဲ့ပါ တယ်။ ပြီးတော့ မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် စား သောက်ပြီးပြန်ခဲ့ပါတယ်''ဟု ပြောသည်။
စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဦးဝင်းမြင့် ၏သားဖြစ်သူ ကိုသူရိန်က ''ကျွန်တော်က ဂျာနယ်တိုက်ထဲကိုဝင်ပြီး ကွန်ပျူတာတွေကို ဝင်ရောက်ဖြုတ်ယူတယ်ဆိုတာ လုံးဝမဟုတ် ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မနေ့ညက သူရိယအ လင်းထုတ်ဝေသူဦးယုနိုင်ရဲ့ မွေးနေ့ညစာ အတူစားပြီးတော့ ဦးယုနိုင်ရယ် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေရယ် သူရိယအလင်းဂျာနယ် ရဲ့ ထွက်သမျှဂျာနယ်တွေဝယ်မယ်ဆိုပြီး ရုံး ကို ရောက်သွားပါတယ်။ ရုံးရောက်သွားတော့ ဦးယုနိုင်က တံခါးဖွင့်ပေးဖို့ပြောပေမယ့် မဖွင့် ပေးလို့ ကျွန်တော်တို့ တော်တော်ကြာကြာ ထိုင်စောင့်နေခဲ့ရပါတယ်။ တံခါးဖွင့်လာ တော့မှ သူရိယအလင်းဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူ ဦးယုနိုင်ကိုယ်တိုင် ကွန်ပျူတာတွေကိုဖြုတ် ပြီး ကားပေါ်တင်သွားတာပါ''ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တွင်ပင် မိမိတို့အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်မည်ကို ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားပြီးဖြစ် သဖြင့် သူရိယအလင်းဂျာနယ်ကို မထုတ်ဝေ ဖြစ်တော့ပါက နောက်ထပ်ထုတ်ဝေရန် ဂျာ နယ်တစ်စောင်နာမည်ကို သူရိယနေဝန်းနာ မည်နဲ့ ထုတ်ဝေခွင့်တင်ထားခဲ့တာ အခုဆို ရင် ထုတ်ဝေခွင့်ကျနေပါပြီ''ဟု ဦးမိုးဟိန်းက ပြောသည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းစာဆရာတစ်ဦးက''အခုပြဿနာက ထုတ်ဝေသူနဲ့ အယ်ဒီတာကြားကဖြစ်တဲ့ ပြဿနာပါ။ ထုတ်ဝေသူအနေနဲ့ မိမိလုပ်ငန်း ကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်သလို လုပ်ငန်းပစ္စည်းတွေ ကို ယူခွင့်ရှိပါတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှားနေ တယ်။ သန်းခေါင်ကျော်မှာ ဝင်ယူတယ်ဆို တာ မှားတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်း ကို အစည်းအဝေးခေါ်တင်ပြဖြေရှင်းပြီး လုပ် ငန်းဖျက်သိမ်းမယ်ဆိုလဲ ဖျက်သိမ်းတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်''ဟု သုံးသပ်ပြောသည်။
ဗုံးကိစ္စရှင်းလင်းရန် အစိုးရနှင့် KNU ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ နေပြည်တော်တွင် တွေ့ဆုံ
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ တောင်ငူစတဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဗုံးဖောက်ခွဲမူတွေရဲ့ အဓိကတရားခံကို ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးက ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေဟာ နေပြည်တော်မှာ မနေ့က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
KNU နယ်မြေတွေထဲမှာ ဗုံးခွဲသမားတွေရှိနေရင် ဖမ်းဆီးပြီး အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဗဟိုကော်မတီဝင် ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်က ပြောပါတယ်။
“ဗုံးခွဲတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်လို့ တချို့အထောက်အထားတွေ ကျနော်တို့ပေးပါတယ်၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်း သဘောထားရှိပါတယ်၊ တချို့ရတဲ့အချက်အလက်တွေပေါ်မှာ ကျနော်တို့ဘက်က ကူညီနိုင်တာတွေရှိပါတယ်၊ ဗုံးခွဲတဲ့သူ ကျနော်တို့နယ်မြေထဲမှာ ရှိနေတယ်ဆိုရင် အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”
ဗုံးဖောက်ခွဲမူတွေကို ကြိုးကိုင်နေသူလို့ အစိုးရက ကြေညာထားတဲ့ စောနေတိုးဟာ KNU တပ်မဟာ ၅ လက်အောက်ခံတပ်ရင်းရဲ့ ဒုတပ်ရင်းမှူး အဆင့်ရှိသူတစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့် KNU နဲ့ အစိုးရကြား ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ် ထိခိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ နှစ်ဘက်လုံးကလက်ခံကြတယ်လို့ ပဒို မန်းငြိမ်းမောင်က ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှုဟာ လုံးဝထိခိုက်မှုမဖြစ်ဘူးဆိုတာကို နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်ခံပြီးတော့ ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝဖွင့်ပြပါတယ်၊ ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလကြီးမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်ဟာ ပိုမိုခိုင်မာတယ်ဆိုတာကို လက်တွေ့ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်”
ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရဘက်က သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ ဦးစိုးသိန်း၊ ဦးအောင်မင်းနဲ့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)က ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး သက်နိုင်ဝင်းတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုးနဲ့ ကာကွယ်ရေးဌာနက ဗိုလ်မှူးကြီး စောရောဂျာခင်၊ ဗိုလ်မှူးကြီး တူးတူးလေးနဲ့ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဗုံးကွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး က တနင်္ဂနွေနေ့မှာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ခေါ်ယူကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဗုံးကွဲမှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ရဲချုပ်ပြောဆိုချက် အပြည့်အစုံ
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလအတွင်း တိုင်းဒေသကြီးအချို့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ချက်များကို မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲချုပ် ဇော်ဝင်း၏ ရှင်းလင်းချက် အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
လေးစားအပ်ပါသော သတင်းစာဆရာကြီးများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ စာနယ်ဇင်းများမှ တာဝန်ခံများ၊ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီ တာဝန်ခံများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ခံများ၊ အထူးဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ ခင်ဗျာ ရှေးဦးစွာ ကိုယ်စိတ် နှစ်ဖြာ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေကြောင်း မေတ္တာပို့သလျက် လေးစားစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သ ဂါရဝ ပြုအပ် ပါတယ်။
သတင်းစာဆရာကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်ကြီးများ ခင်ဗျာ ဒီနေ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရန်ကုန်၊ တောင်ငူ၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းမြို့ကြီးများမှာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ပြည်သူလူထုနဲ့ ပူးပေါင်း၍ စုံစမ်းဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အခြေအနေ များအား ပြည်သူအားလုံးနဲ့ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ သတင်းမီဒီယာများ အားလုံး သိရှိနိုင် စေရန်အတွက် ရည်ရွယ် ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လေးစားအပ်ပါသော သတင်းစာဆရာကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်ကြီးများခင်ဗျာ နိုင်ငံတော် အတွင်း တိုင်းဒေသကြီးအချို့မှာ လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ပြည်သူ့ဘဝ တည်ငြိမ် အေးချမ်းရေး ပျက်ပြားစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး မသမာ သူများဟာ အောက်တိုဘာလ အတွင်း ဖောက်ခွဲမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်သူလူထုများ ထ်ိတ်လန့်မှု၊ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေပြီး နိုင်ငံတော်ရဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကို ထိခိုက်ပျက်ပြား စေရန် ဦးတည်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ ပေါက်ကွဲမှု (၆) ကြိမ်၊ မိုင်းရှင်းလင်းပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းအောင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှု (၄) ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း (၁၀) ကြိမ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မိုင်းအရေ အတွက် (၁၀) လုံးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒီဖြစ်စဉ်မှာ အပြစ်မဲ့ပြည်သူ (၂) ဦး သေဆုံးပြီး (၃) ဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း စိတ်မကောင်းဖွယ်ရာ သိရှိခဲ့ရပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ ၁၀၀၀ နာရီချိန် ဖြူးမြို့ ကားဂိတ်မှာ ဇေယျာဟိန်းခရီးသည်တင် ကားပေါ်မှ မသင်္ကာဖွယ်ရာ မိုင်းတစ်လုံးတွေ့ရှိရသဖြင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းအောင် စနစ်တကျ ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်က ပြည်နယ်/ တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး အားလုံးကို ယခု ဖြစ်စဉ်ချပြပြီး မိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လုံခြုံရေး ဂရုပြုဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ လှည့်ကင်း ပတ်ကင်းများနဲ့ နယ်မြေစိုးမိုးမှု ရရှိရေး ဆောင်ရွက်ဖို့ ကြပ်မတ်ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဖြူးမြို့မ ရဲစခန်းက ဥပဒေနဲ့အညီ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပုဒ်မ ၅ ဖြင့် ဥပဒေနဲ့ အညီ အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်။
အဲဒီလို ဖြစ်ပွားပြီး တစ်ရက်ကျော်ဖြစ်တဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ ၂၀၅၀ နာရီချိန် တောင်ငူမြို့၊ ချမ်းမြေ့တည်းခိုခန်းမှာ မိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီး ၂ ဦး သေဆုံး ၁ ဦး ဒဏ်ရာရတဲ့ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ စိစစ်ဖော်ထုတ်ချက်အရ မသင်္ကာတရားခံ စောထွန်းထွန်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဝတ္တုပစ္စည်းများ ပုဒ်မ ၃ ဖြင့် ဥပဒေနဲ့ အညီ အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထား ရှိပါတယ်။
အဲဒီသတင်းအရ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့က ဆက်လက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခဲ့ရာမှာ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ၁၂၃၀ နာရီအချိန်မှာ လမ်းမတော်မြို့နယ် ကုန်တင်ကုန်ချ အလုပ်သမားရုံးမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အောင်ဆန်းလင်း (ခ) ဆန်းလင်းကို အဲဒီ အလုပ်သမားရုံး အပေါ်ထပ်မှာ တွေ့ရှိဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး အငှားယာဉ်မောင်း အောင်မင်းဦးကို ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ အခြေအနေကို တင်ပြပါမယ်။
ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ချက်အရ ၁၄၀၀ ချိန် အငှားယာဉ်မောင်း အောင်မင်းဦးဟာ သာကေတမြို့နယ် (၆) အရှေ့ရပ်ကွက် ဝေဇယန္တာလမ်း အမှတ် (၁၀၁၀) တွင် နေထိုင်ကြောင်း သိရှိရလို့ သွားရောက်စုံစမ်းရာ ခြံတခါးနှင့် နေအိမ်တံခါးသော့ခတ်ထားပြီး ၁၁၃၀ ချိန်ခန့်မှ စလို့ နေအိမ်အပြင်ထွက်ခွာသွားကြောင်း သိရှိရတဲ့အတွက် ဖြန့်ကြက်ရှာဖွေခဲ့ရာ ၂၀၁၃ ချိန် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ပြည့်စုံဝင်း စတိုးဆိုင်ရှေ့မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့က အောင်မင်းဦးကို တွေ့ရှိဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အောင်မင်းဦးကို စစ်ဆေးရာမှာ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ၁၂၀၀ နာရီချိန်မှာ ကဝမြို့နယ် ကျားတက်ရွာမှ တစ်ရွာတည်းသား သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ မောင်မိုး (ဖ) ဦးမြင့်သိန်း မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်နေသူက တက္ကဆီငှားရမ်းခဲ့ပြီး အောင်မိုးရဲ့ မိတ်ဆွေ (စောမြင့်လွင်) ကို သာကေတမြို့နယ် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာမှ ကျောက်တံတားမြို့နယ် Hitachi အပေါ်ဆုံးထပ်မှာရှိတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ကို လိုက်ပို့ခဲ့ပြီး မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ ကန်ဘောင်ရပ်ကွက် (၉၄) လမ်း၊ အမှတ် (၃၁) ၊ (၄) လွှာ/ ယာဘက်မှာနေတဲ့ အောင်မိုး ရဲ့ နေအိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ၁၈၀၀ ချိန်မှာ အောင်ဆန်းလင်း၊ အောင်မိုးနဲ့ ဇနီး၊ စောမြင့်လွင်တို့နဲ့ အတူ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ရွှေကောင်းဟော့ပေါ့ ဆိုင်ကို သွားရောက် စားသောက်ခဲ့ပြီးတော့ အောင်မိုးနဲ့ ဇနီးတို့ လမ်းခွဲကာ ၁၉၃၀ ချိန် အောင်ဆန်းလင်း၊ စောမြင့်လွင်တို့နဲ့အတူ အလုံမြို့နယ်ရှိ Western Park II စားသောက်ဆိုင်ကို ဆက်လက်သွားရောက် စားသောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂၂၀၀ ချိန် အဲဒီဆိုင်ကနေ ပြန်လည် ထွက်ခွာပြီး စောမြင့်လွင်ကို အောင်ဆန်းလင်းနဲ့ အတူ ပဲခူးမြို့ထိ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်းနဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ၀၅၀၀ နာရီအချိန်မှာတော့ သာကေတမြို့နယ် နေအိမ်ကို ပြန်ရောက် ရှိစဉ် စောမြင့်လွင်က အောင်မင်းဦးကို ဖုန်းဆက်သွယ်ပြီး သူ့ရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် ကားပေါ်မှာကျန်ခဲ့ကြောင်းပြောတဲ့အတွက် ကားပေါ်မှာ တွေ့ရတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကို ညီဖြစ်သူ ဝင်းသန်း(၃၅) နှစ် သာကေတ မြို့နယ်နေသူထံ ခေတ္တအပ်နှံပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဝင်းသန်း အသက် ၃၅ နှစ် (ဖ) ဦးသောင်းစိန်ရဲ့ နေအိမ်မှာ အဲဒီ ပိုက်ဆံအိတ်ကို သွားရောက်ရှာဖွေရာ စောမြင့်လွင် အသက်၂၅ နှစ် ကရင်/ဗုဒ္ဓ၊ ကျပန်း၊ ၃/ ဖပန(နိုင်) ၀၂၂၅၇၆ မလိကျောက်ကျေးရွာ ဖာပွန်မြို့နယ်နေသူရဲ့ မှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားနဲ့ အတူ မြန်မာငွေရောရာ ၃၇၁၅၀ ကျပ်၊ လိပ်စာကတ် ၁၀ ခု၊ ဈေးဝယ်ဘောင်ချာ ၁ စောင်နဲ့ ဘော့ပင် ၁ ချောင်းတို့ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့က သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလိုသိမ်းဆည်းရမိတဲ့ စောမြင့်လွင်ရဲ့ မှတ်ပုံတင်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့တွင်း တည်းခို သွားလာနိုင်မဲ့ နေရာတွေကို စိစစ်အတည်ပြုနေစဉ် ၂၃၂၀ အချိန်မှာ ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ် အခန်းအမှတ် (၉၂၁) မှာ မိုင်းတစ်လုံးပေါက်ကွဲလို့ နိုင်ငံခြားသူ တစ်ဦး ဒဏ်ရာရ တဲ့ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရတဲ့ အတွက် အဲဒီဟိုတယ်ရဲ့ တည်းခိုသူ စာရင်းများကို အသေးစိတ်စိစစ်တဲ့အခါ စောမြင့်လွင်ဟာ အခန်းအမှတ် (၉၂၁) မှာ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ၁၅ ၀၀ အချိန်မှ ၁၃ ရက်နေ့ ၀၆ ၀၀ ချိန်ထိ တည်းခို သွားကြောင်း သိရှိရပြီး ဟိုတယ်ရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းများကို စိစစ်ချက်အရလည်း စောမြင့်လွင် ရောက်ရှိသွားလာမှု မှတ်တမ်းများကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်စဉ် ကိုလည်း ကျောက်တံတားမြို့မရဲစခန်းမှ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပုဒ်မ ၃ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပြစ်မှု ဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၃၈ ဖြင့်လည်းကောင်း ဥပဒေနဲ့အညီ အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့ စောမြင့်လွင်အား စုံစမ်းဖမ်းဆီးတဲ့ အခြေအနေများကို ရှင်းလင်း တင်ပြပါမယ်။
ဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့ အငှားယာဉ်မောင်း အောင်မင်းဦးဆီက ရရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက် များအရ စောမြင့်လွင်ရဲ့ တည်နေရာကို နည်းပညာ အထောက်အကူနဲ့ အတည်ပြုခဲ့ရာမှာ ဘီးလင်းမြို့မှာ ရှိနေကြောင်း သိရလို့ မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ၀၇ ၃၀ ချိန် ဘီးလင်းမြို့၊ ဗိုလ်တေဇရပ်ကွက်၊ ဘီးလင်း-နတ်ကြီး-ဖာပွန် သွားလမ်းမပေါ်မှာ ၂၄ယ/ ၉၅၁၀၁ ဆိုင်ကယ်နဲ့ မောင်းနှင်သွားနေတဲ့ စောမြင့်လွင်ကို ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ၁၁ ၂၀ နာရီအချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ခေါ်ယူပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖောက်ကွဲမှုတရားခံ စောမြင့်လွင်ရဲ့ မိတ်ဆွေ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် နေထိုင်သူ အောင်မိုးကို ဖမ်းဆီးရမိဘို့အတွက် သူရဲ့နေအိမ်ကို သွားရောက်စုံစမ်းရာ တိမ်းရှောင် နေကြောင်း သိရပြီး နည်းပညာ အထောက်အကူနဲ့ သူရဲ့ တည်နေရာကို ရှာဖွေချက်အရ သန်လျင်မြို့၊ ဆေးရုံကြီးအနီးမှာ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ၂၃ ၀၀ နာရီအချိန် ဟိုင်းလပ်ဆပ်ဖ်အနက်ရောင် ယာဉ်အမှတ် ၄ ဃ/၂၅၇၆ နဲ့အတူ အောင်မိုးကို တွေ့ရှိဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။
အောင်မိုးကို စိစစ်ဖော်ထုတ်ချက်အရ စောမြင့်လွင်ဟာ ရွှေဖူးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးမြဖူးရဲ့ ကားနဲ့ ရန်ကုန်သို့ လာရောက်ပြီး သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ ၁ ရက် တည်းခိုခဲ့ဘူးကြောင်း၊ စောမြင့်လွင်ဟာ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ၀၇ ၀၀ချိန် သူရဲ့ နေအိမ်ကို ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့မှာ သွားလာ လည်ပတ်နိုင်အောင် သူရဲ့သူငယ်ချင်း ယာဉ်မောင်း အောင်မင်းဦးကို ခေါ်ယူထည့်ပေးလိုက်ကြောင်း၊ ညနေပိုင်းမှာ ရွှေကောင်း ဟော့ပေါ့ဆိုင်၌ ညစာလိုက်ကျွေးကြောင်း၊ ညစာစားပြီး စောမြင့်လွင်က မြို့ထဲတွင် ထပ်မံစားသောက်ဖို့ ယာဉ်မောင်း အောင်မင်းဦး၊ အောင်ဆန်းလင်းတို့နဲ့အတူ ၁၉၃၀ ချိန် ထွက်ခွာသွားကြောင်း ထွက်ဆိုပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး စောမြင့်လွင်ကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရရှိမှု အခြေအနေများကို တင်ပြပါမယ်။
စောမြင့်လွင်ဟာ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှာ စတင်၍ KNU ၌ ၅ နှစ် တာဝန် ထမ်းဆောင်ပြီးနောက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ KNU မှ ထွက်ပြီးတော့ ဦးမြဖူးရဲ့ ရွှေဖူးသတ္တု တူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီ၌ နေ့စားအလုပ်သမားအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ရာမှ KNU အဖွဲ့အစည်း ရဲ့ စီးပွားရေး အဖွဲ့တစ်ခုမှ နေတိုး(ခ) စောရွှေထူးနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြောင်း၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ဘီးလင်းမြို့ ဦးမြဖူးနေအိမ်မှာ ရှိနေစဉ် နေတိုး(ခ) စောရွှေထူး က ဖုန်းဆက်ခေါ်တဲ့အတွက် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ ၀၇၀၀ ချိန်ထွက်ခဲ့ရာ မလိကျောက် အကောက်ဂိတ်ကို ၁၂၀၀ ချိန်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး နေတိုး(ခ) စောရွှေထူးရဲ့ တပည့် မောင်ချမ်းအေး၊ တင်အောင်ဟိန်းတို့ (၂) ဦး ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ အကောက်ဂိတ်၌ ညအိပ်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ နေတိုး(ခ) စောရွှေထူးက အိတ်(၁)လုံးဖွင့်ပြလို့ မိုင်း (၁၀) လုံး တွေ့ရှိရပြီး ဖောက်ခွဲနည်းကို (၁၅) ကြိမ်လောက် သင်ကြားပေးခဲ့လို့ တတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ နေတိုး(ခ) စောရွှေထူးက ရန်ကုန်မြို့ ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်နဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ မိုင်းထောင် ဖောက်ခွဲဖို့ မိုင်းနှစ်လုံးနဲ့ ငွေကျပ် ၅ သိန်းပေး စေခိုင်းခဲ့ပြီး သူလဲ ဘီးလင်းသို့ ပြန်လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့ ၀၆၀၀ ချိန် ဘီးလင်းနေအိမ်မှာ ရှိနေစဉ် နေတိုး(ခ) စောရွှေထူးက ဦးမြဖူးဆီ ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး သူနဲ့အတူ ရန်ကုန်ကိုလာဘို့ ပြောတာကြောင့် ၁၂၀၀ ချိန် ဦးမြဖူးနဲ့ အတူ ရန်ကုန်ကို သွားခဲ့ကြောင်း၊ ၁၈၀၀ ချိန် နေတိုး(ခ) စောရွှေထူးနဲ့ စိုးမြင့်အောင်တို့ အိုလံပစ် ဟိုတယ်မှာ ရှိကြောင်း ဖုန်းဆက်ပြောတဲ့အတွက် အဲဒီဟိုတယ်ကို သွားရောက်တည်းခိုခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီလို တည်းခိုစဉ် ဦးမြဖူးက ဝင်းကိုကိုအမည်နဲ့ လည်း ကောင်း၊ နေတိုး(ခ) စောရွှေထူးက စောရွှေထူး (၃၀) နှစ်၊ (ဖ) ဦးပန်းအောင်၊ ၃/ဖပန(နိုင်) ၀၂၄၀၈၅ အမည်နဲ့လည်းကောင်း တည်းခိုကြရာမှာ နေတိုး(ခ) စောရွှေထူးက အခန်းအမှတ် (၁၀၄)၊ စိုးမြင့်အောင်နဲ့ သူက အခန်းအမှတ် (၁၀၉)မှာ ညအိပ်ပြီး ဦးမြဖူးဟာ ဟိုတယ် အပေါ်ထပ်မှာ သွားရောက် အိပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ ချောင်းသာကို သွားခဲ့ကြပြီး ချောင်းသာ ဟိုတယ်မှာ နေတိုး(ခ) စောရွှေထူးက သူ့ကို နိုင်ငံခြားသားတွေ တည်းခိုတဲ့ ကုန်သည်ကြီးများဟိုတယ်၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်နဲ့ နိုင်ငံခြားသား စားသောက်ဆိုင်တွေကို အဓိကထား ဖောက်ခွဲရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖောက်ခွဲရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ နိုင်ငံခြားသားများ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ရောက်ပြီး တိုင်းရင်းသားများရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများမှာ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လာမှုများ အဟန့်အတားဖြစ်စေဖို့ ဖြစ်ကြောင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့နောက်ဆုံး ထားပြီး နှစ်နေရာ လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ အဲဒီလို လုပ်ပေးပါက ရွှေတူးဖော်ခွင့် လုပ်ကွက်ပေး မယ်လို့ ပြောတာမို့ သူက သဘောတူ လက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၆ ရက်နေ့မှာ သူတို့အဖွဲ့ ရန်ကုန်ကို ပြန်လာတာ အိုလံပစ် ဟိုတယ်မှာ နေတိုး (ခ) စောရွေထူး က အခန်းအမှတ် (၁၀၃)၊ သူက အခန်းအမှတ် (၁၀၄) တွင် တည်းခိုပြီး ဦးမြဖူးနဲ့ ဦးစိုးမြင့်အောင်တို့က နေအိမ်ပြန်အိပ်ကြကာ ညနေမှာတော့ နေတိုး (ခ) စောရွေထူးက သူ့ကို ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်ကို လေ့လာဖို့ ဦးမြဖူးနဲ့ စေလွှတ် ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ နေတိုး (ခ) စောရွေထူးက သူ့ကို ဘီးလင်းသို့ ပြန်လည် စေလွှတ်တဲ့အတွက် ပြန်လာခဲ့ပြီး နေတိုး (ခ) စောရွေထူးတို့မှာ ရန်ကုန်၌ ကျန်ရစ်ခဲ့ ကြကြောင်း၊ နေတိုး (ခ) စောရွေထူး၊ စိုးမြင့်အောင်၊ ဦးမြဖူး ယာဉ်မောင်း ဇော်လတ်မောင် တို့ဟာ အဖြူရောင် Mark-X ကားနဲ့ မန္တလေးဘက်သို့ ခရီးသွားရန်ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။
စောမြင့်လွင်ဟာ အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ မိုင်းနှစ်လုံးယူဆောင်ပြီးတော့ ဘီးလင်းကနေ ကားငှားထွက်ခွာခဲ့ရာ ၁၄၀၀ ချိန် ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်ရှိပြီး ၁၄၃၀ ချိန် ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်အခန်းအမှတ် (၉၂၁) ကို ရောက်ရှိ တည်းခို ခဲ့ကြောင်း၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ နံနက် ၀၃၀၀ ချိန် အိပ်ရာမှထပြီး မိုင်းတစ်လုံးထုတ်ကာ မိုင်းခွဲမဲ့ အချိန်ကို (၄၈) နာရီပြတဲ့ ပဉ္စမပေါက်အတွင်းသို့ ဝါယာကြိုး တစ်စ ထည့်ပြီး ရေအိမ်သာနောက်၌ ထောင်ထားခဲ့ကြောင်း၊ အဲဒီနောက် နံနက် ၀၆၀၀ ချိန် ဟိုတယ်မှ ထွက်ခွာလာပြီး ရွှေဖူးသတ္တု တူးဖော်ရေး ကုမ္ပဏီမှာ ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ တာမွေမြို့နယ်နေ ကိုအောင်မိုးထံ ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး ကိုအောင်မိုး နေအိမ်ကို ရောက်ခဲ့ကြောင်း၊ ၁၂၀၀ ချိန် ရန်ကုန်မြို့တွင်း လည်ပတ်ခဲ့ပြီး ၁၆၃၀ ချိန် ကိုအောင်မိုး အိမ်ပြန်ရောက် ခဲ့ကြောင်းနှင့် ၁၈၀၀ ချိန်ခန့်တွင် ကိုအောင်မိုးတို့ လင်မယားနဲ့ အတူ ရွှေကောင်းစားသောက်ဆိုင်သို့ သွားရောက်စားသောက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အဲဒီကမှတစ်ဆင့် ၁၉၃၀ ချိန် အလုံမြို့နယ်၊ Western Park II စားသောက်ဆိုင်ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး စားပွဲအမှတ် (၁၉) ၌ အငှားယာဉ်မောင်း အောင်မင်းဦး၊ အောင်ဆန်းလင်း တို့နဲ့ ဘီယာသောက်နေစဉ် အငှားယာဉ်ပေါ်ရှိ ကျောပိုးအိတ်အတွင်းမှ လက်ကျန်မိုင်း တစ်လုံးကို ကြွပ်ကြွပ်အိတ်အနက်နဲ့ ယူဆောင်၍ စားပွဲအမှတ် (၁၉) အောက်တွင် ထောင်ထားခဲ့ကြောင်းနှင့် ၂၂၀၀ ချိန် အငှားယာဉ်မောင်း ကို ပဲခူးမြို့သို့ လိုက်ပို့ရန် ငွေကျပ် ၇၀၀၀၀ ဖြင့် ငှားရမ်းပြီး ရန်ကုန်မြို့မှ ထွက်ခွာခဲ့ရာ ၂၄၀၀ ချိန် ရွှေမော်ဓောဘုရားအနီး နေထိုင်တဲ့ ယခင်က ခင်မင်ရင်းနှီးသူ ရွှေတွင်းပိုင်ရှင် ဦးသိန်းဝင်းရဲ့ နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိ ညအိပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ၀၇၀၀ ချိန် ပဲခူးမြို့မှ ဘီးလင်းမြို့သို့ ထွက်ခွာလာရာ ၀၉၀၀ ချိန် ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဦးမြဖူးရဲ့ နေအိမ်၌ တည်းခိုးနေထိုင်ကြောင်းနဲ့ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ၀၇၄၅ ချိန် သူပိုင်တဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ စီးနင်းသွားလာစဉ် ဘီးလင်းမြို့နယ်၊ ဗိုလ်တေဇရပ်ကွက်၊ အောင်မင်္ဂလာလမ်းမပေါ် အရောက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ဘီးလင်းမြို့မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကို ခေါ်ဆောင်စစ်ဆေးခြင်း ခံခဲ့ရကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
လေးစားအပ်ပါသော သတင်းစာဆရာကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်ကြီးများ ခင်ဗျာ ဆက်လက်၍ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်းဖြစ်စဉ်များကို ရှင်းလင်း တင်ပြသွားပါမယ်။
အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ၁၃၁၅ ချိန် မန္တလေးမြို့ ၁၆x၈၀ လမ်းထောင့် ရွှေဘဲ စားသောက်ဆိုင်အပေါ်ထပ်မှာ မသင်္ကာဖွယ်ရာ အထုပ်တွေ့ရှိရပြီး ၁၆ လမ်းတောင်ဘက် ပလက်ဖောင်းမှာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက အဲဒီအထုပ်အတွင်းရှိ မိုင်းကို ဖောက်ခွဲ ဖျက်ဆီးပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ် မှာလည်း အောင်မြေသာစံ မြို့မ ရဲစခန်းမှ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပုဒ်မ ၃ ဖြင့် ဥပဒေနဲ့အညီ အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ၀၃၃၀ ချိန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မင်းလမ်းရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည့်စုံ ဟိုတယ်အပေါ်ထပ်နဲ့ ၀၅၄၅ ချိန် စစ်ကိုင်းတောင်ပေါ်ရှိ ဆွမ်းဦးပုညရှင် မုခ်ဦးအဝင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းမှာ မိုင်းတစ်လုံးစီ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ပေမဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုများ မရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်များကိုလည်း စစ်ကိုင်းမြို့မ ရဲစခန်းမှ ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ပုဒ်မ ၃ ဖြင့် ဥပဒေနဲ့အညီ အမှုဖွင့် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ထားရှိပါတယ်။
အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်လို့ ရဲချုပ်ဟာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတို့နဲ့ အတူ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ နေရာများအား အသေးစိတ် စစ်ဆေးပြီး အခင်းဖြစ်နေရာ များမှာ တပ်ဆင်ထားရှိတဲ့ CCTV ကင်မရာမှတ်တမ်းများမှာရှိတဲ့ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေကို ထုတ်ယူပြီးနောက် ရန်ကုန်၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးမြို့ ဖြစ်စဉ်များကို ဆက်စပ်ဖော်ထုတ် သွားဖို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ ဟိုတယ်ကို အသေးစိတ် စစ်ဆေးရာမှာ တရားခံ စောမြင့်လွင်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်မှာ ပါတဲ့ နေတိုး (ခ) စောရွှေထူးနဲ့ ဇော်လတ်မောင်တို့ဟာ တည်းခိုသူ စာရင်း၌ ဇော်လတ်မောင် နာမည် တစ်ခုသာ ပေး၍ နှစ်ဦးတည်းခိုသွားကြောင်း မသင်္ကာဖွယ် တွေ့ရှိရလို့ ဟိုတယ်ရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းအား ဆက်လက် ရှာဖွေခဲ့ရာ မသင်္ကာဖွယ် တရားခံဓာတ်ပုံများ ရရှိခဲ့တာကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ပေးပို့ စိစစ်စေခဲ့ရာ ဇော်လတ်မောင်နဲ့ နေတိုး (ခ) စောရွေထူးတို့ ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဆွမ်းဦးပုညရှင်၊ ကောင်းမှုတော်ရှိ CCTV များက မှတ်တမ်းများနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ အဆိုပါ နေရာများကိုလည်း Mark-X အဖြူရောင် ၆ဂ/၅၉၄၈ နဲ့ ရောက်ရှိသွားလာ ခဲ့ကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း အဆိုပါ ဓာတ်ပုံများနှင့် ရွှေဘဲ စားသောက်ဆိုင်ရှိ CCTV မှ မှတ်တမ်းပုံများကို ဆက်လက် တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရှုရာမှာ အဲဒီ မသင်္ကာဖွယ် တရားခံများဟာ မိုင်းတွေရှိတဲ့ စားပွဲ အမှတ် (၁၄) ၌ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ ၁၂၀၀ ချိန်ခန့်မှာ စားသောက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ထုတ်ရရှိတဲ့အပြင် စားပွဲအောက်မှာ မိုင်းကို ချည်နှောင်ထားခဲ့တဲ့ သွပ်ကြိုးစကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။
လေးစားအပ်ပါသော သတင်းစာဆရာကြီးများနဲ့ ဧည့်သည်တော်ကြီးများ ခင်ဗျာ
ဇော်လတ်မောင်ရဲ့ ထွက်ဆိုချက်အရ မန္တလေးမြို့၊ စစ်ကိုင်းမြို့တို့မှ အခင်းဖြစ် နေရာများကို နေတိုး (ခ) စောရွေထူးနဲ့ အတူ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နေတိုး (ခ) စောရွေထူး၊ ဇော်လတ်မောင်တို့အဖွဲ့ဟာ ခရီးစဉ်၌ တောင်ငူ၊ ညောင်ဦး၊ မကွေး၊ ပုပ္ပါးမြို့ များကို ရောက်ရှိသွားလာခဲ့ကြောင်း သိရှိရတာကြောင့် ပြည်သူလူထု ဘေးကင်း လုံခြုံရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့ စစ်မြေပြင် အင်ဂျင်နီယာ တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းပြီး သံသယဖြစ်ဖွယ်နေရာတွေကို မိုင်းအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခင်းဖြစ်နေရာများက သိမ်းဆည်းရမိခဲ့တဲ့ သက်သေခံ ပစ္စည်းများအပေါ် မှုခင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့ ကျွမ်းကျင်သူ ထင်မြင်ချက်များ အရ အောက်တိုဘာက ၉ ရက်နေ့ ဖြူးမြို့ဖြစ်စဉ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့ တောင်ငူမြို့၊ ချမ်းမြေ့တည်းခိုခန်း ဖြစ်စဉ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ စော်ဘွားကြီးကုန်းဖြစ်စဉ်နဲ့ သာကေတမြို့နယ်၊ ၃/မာန်ပြေ ရပ်ကွက်ဖြစ်စဉ် များက မိုင်း (၅) လုံးရဲ့ အသုံးပြု ပစ္စည်းများ နှိုင်းယှဉ်ရာမှာ TNT ယမ်းတုံး ၀.၅ ပေါင်စီ၊ ဒီတိုနေတာမှာ ဝါ/ဖြူ ဝါယာကြိုးနဲ့ ကြိုးအရှည် ၁၀ ပေ ခန့်စီ၊ ဘက်ထရီ ၉ ဗို့စီ၊ မီးတိတ် အနက်ရောင်များ၊ ချိန်ကိုက်နာရီ ၁.၅ ဗို့ ဓာတ်ခဲပါ မိုင်း (၄) လုံးနဲ့ ထောင်ချောက် မိုင်း (၁) လုံး အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရတာကြောင့် အဖွဲ့အစည်း/ လူတစ်ဦးတည်းမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဒေသလုပ် မိုင်းများဖြစ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါတယ်။
အလားတူ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်နေ့ အလုံမြို့နယ်၊ Western Park II ဖြစ်စဉ်နဲ့ အောင်မြေသာစံမြ်ို့နယ်၊ ရွှေဘဲ စားတော်ဆက်ဖြစ်စဉ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ Traders Hotel၊ စစ်ကိုင်းမြို့၊ ရွှေပြည့်စုံ ဟိုတယ်နဲ့ ဆွမ်းဦး ပုညရှင် စေတီဖြစ်စဉ်တို့က မိုင်း (၅) လုံးရဲ့ အသုံးပြုပစ္စည်းများ နှိုင်းယှဉ်ရာမှာ M-67 လက်ပစ်ဗုံး တစ်လုံးစီ၊ ဒီတိုနေတာ ဝါ/ဖြူ ဝါယာကြိုးနဲ့ ကြိုးအရှည် ၅ လက်မ ခန့်စီ၊ Sequence Controller များ အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်းမှ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနဲ့ ဒေသလုပ်မိုင်းများ ဖြစ်ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါတယ်။
ရန်ကုန်ဖြစ်စဉ်နှစ်ခုမှာ နေတိုး (ခ) စောရွေထူးရဲ့ စေခိုင်းချက်ကြောင့် စောမြင့်လွင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် လည်းကောင်း၊ ကျန်တဲ့စစ်ကိုင်း မန္တလေးဖြစ်စဉ် သုံးခုမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းများနှင့် တပ်ဆင်ပုံစနစ် တူညီမှုကြောင့် လည်းကောင်း၊ အဆိုပါနေရာတွေကို နေတိုး (ခ) စောရွေထူးနှင့် နေတိုး ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့က ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်၊ စစ်ကြောဖော်ထုတ်ချက်များအရ နိုင်ငံအတွင်းမှာ နိုင်ငံခြားသား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်မှုကို ခြိမ်းခြောက်လိုတဲ့ အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ခိုင်လုံစွာ သိရှိရပါတယ်။ ဆက်လက် စစ်ကြော ဖော်ထုတ်ချက်များအရ ပိုမိုတိကျတဲ့ သတင်း အချက်အလက်များ ရရှိမှုကို သတင်းထုတ်ပြန် ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေးစားအပ်ပါသော သတင်းစာဆရာကြီးများနဲ့ ဧည့်သည်တော်ကြီးများခင်ဗျာ
ဒီပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်များမှာ ကျူးလွန်သူများနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ရေး အတွက် နိုင်ငံတကာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများထံမှ နည်းပညာ အထောက်အကူများ ရယူ၍ လည်းကောင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရဲအဖွဲ့ချုပ် Interpol မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနဲ့ သတင်း အချက်အလက် အထောက်အကူများရယူ၍ လည်းကောင်း ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး ဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များ၊ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိရေးအတွက် လည်းကောင်း ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အသိပေးတင်ပြလိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ပြည်သူလူထုနဲ့ပူးပေါင်းပြီး နည်းပညာ အထောက်အကူ ပစ္စည်းများကို အခြေခံ၍ စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်မှုများကြောင့် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ စစ်ကိုင်း၊ တောင်ငူ၊ ဖြစ်စဉ်များ၊ ကျူးလွန်တဲ့တရားခံများနဲ့ ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို အချိန်တိုအတွင်း စုံစမ်းဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ၈ ဦးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် အဓိက ပါဝင် ပတ်သက်နိုင်တဲ့ ကျန်တရားခံများကို ဆက်လက် ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်နေဆဲ ဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ မိဘပြည်သူများရဲ့ စိုးရိမ်စိတ်များ လျော့ပါးစေရန်နဲ့ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ် တို့ကို ဆောလျင်စွာ အသိပေးလိုပါသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ရှင်းလင်း တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
လေးစားအပ်ပါသော မိဘပြည်သူများ၊ သတင်းစာဆရာကြီးများနဲ့၊ ဧည့်သည်တော်ကြီးများ ခင်ဗျာ
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဟာ ပြည်သူကို ဗဟိုပြုလျက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် ရပ်ရွာအေးချမ်း သာယာရေးတို့အပြင် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး စိတ်အေးချမ်းသာစွာ နေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အစဉ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါကြောင်းနဲ့ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ လက်တွဲ၍ ဆက်လက် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ပေးကြပါရန် အလေးအနက် မေတ္တာရပ်ခံပန်ကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ်။
ရှာဘတ်ဗီဒီယိုတွင် ပါဝင်သော သြဇာရှိ ဗြိတိန်မွတ်စလင် လေးဦးအား သတိဖြင့် နေထိုင်ကြရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ သတိပေး
Posted by drmyochit Sunday, October 20, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
လန်ဒန်အနောက်ပိုင်းတွင် ဂျာနယ်လစ် ဂျမယ်မက်ရိုအာက မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ် (Photo:AFP)
ဆိုမာလီယာရှိ ရှာဘတ်စစ်သွေးကြွများနှင့် ဆက်နွှယ်သော အစွန်းရောက်များက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ဗီဒီယိုတွင် 'အစ္စလာမ် ရန်သူများ' ဟု ဖော်ပြခံခဲ့ရသည့် သြဇာရှိ ဗြိတိန်မွတ်စလင် လေးဦးက မိမိတို့သည် အန္တရာယ် ကျရောက်နိုင်သည့်အတွက် သတိဖြင့် နေထိုင်ကြရန် ဗြိတိန်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ သတိပေးခြင်း ခံရကြောင်း အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် YouTube ၌ တင်ခဲ့သည့် "The Woolwich Attack: It's an Eye for an Eye" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် တစ်နာရီနီးပါးကြာသော ယင်းဗီဒီယိုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး ရှာဘတ်စစ်သွေးကြွ အဖွဲ့က တင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု လန်ဒန်မြို့တော် ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဗြိတိန်မြေပေါ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုများ ပြုလုပ်ရန် မွတ်စလင်များကို တိုက်တွန်းထားသည့် ယင်းဗီဒီယိုသည် ပြီးခဲ့သောလက ကင်ညာတွင် ရှော့ပင်းမော တိုက်ခိုက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရှာဘတ်အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အမေရိကန် အခြေစိုက် SITE Intelligence Group က ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းဗီဒီယိုတွင် ဗြိတိန်လေသံဖြင့် နောက်ခံစကားပြောသူ တစ်ဦးက အစ္စလာမ် သင်ကြားမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် လေးဦးအား ရွေးထုတ်ပြီး သတိပေးခဲ့ကြောင်း ဂါးဒီးယန်း သတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဗီဒီယိုတွင် ပါဝင်သူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် လန်ဒန်အခြေစိုက် ဘာသာရေး ဆရာနှင့် ဂျာနယ်လစ် ဂျမယ်မက်ရိုအာက သူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့က သတိမလွတ်ဘဲ နေထိုင်ရန် သတိပေးခဲ့သည်ဟု Facebook တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ အခြားသုံးဦးမှာ အကြမ်းဖက်မှုများကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်သည့် ဒါရိုက်တာနှင့် ဂျာနယ်လစ် မိုဟာမက်အန်ဆာ၊ သတင်းသုံးသပ်သူ မိုဟာမက် ရှာဖစ်နှင့် အစွန်းရောက်မှု ဆန့်ကျင်သည့် ပညာရှင်များအဖွဲ့ Quilliam မှ အကြီးတန်း သုတေသန ပညာရှင် အူစမာဟာဆန်တို့ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ မိမိ၏ နေအိမ်အပြင်ဘက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ပုံမှန်ကင်းလှည့်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း အန်ဆာက Twitter တွင် ရေးသားခဲ့သည်။ မိုဟာမက်ရှာဖစ်နှင့် အူစမာဟာဆန်တို့ ထံသို့လည်း ရဲတပ်ဖွဲ့က သွားရောက်ပြီး လုံခြုံရေးအတွက် သတိပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ လန်ဒန်အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် မေ ၂၂ ရက်က ဗြိတိန် စစ်သားတစ်ဦးကို သတ်ခဲ့သည့် မွတ်စလင်နှစ်ဦးအား လာမည့်လတွင် ရုံးတင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်မဘဝ ပရ အတွေ့အကြုံ "(ကြောက်တက်ရင် မဖတ်ပါနှင့်)
Posted by drmyochit Sunday, October 20, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
မှတ်မှတ်ရရ ၁၉၉၀ ကျော်ကာလ သြဂုတ်လရဲ့ နေ့လည်ခင်း တခုမှာပေါ့။ ကျမ ကျောင်းက ပြန်လာပြီး အိမ်ထဲဝင်တော့ စိတ်ထဲမှာ မသိုးမသန့် ဖြစ်သလို ခံစားရတယ်။
အ၀တ်လဲဖို့ ကိုယ့်အခန်းကို အသွား တီဗီကြည့်တဲ့ ဟောခန်းကို ဖြတ်တော့ တီဗီရှေ့က သစ်သားကွပ်ပျစ် ကလေးပေါ်မှာ မတင်ဌေး ဆိုတဲ့ အိမ်အကူကောင်မလေး နေမကောင်းလို့ လှဲနေတာ တွေ့တယ်။ သူ့ဘေး နားမှာတော့ ဗေဒင်ဆရာမ ယောင်ယောင် ဘာယောင်ယောင် မဟာဘုတ်တောင် မထူတတ်တဲ့ အမျိုးသမီး တယောက် ရှိနေတယ်။ နာမည်က မဝေတဲ့။ သူက ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး အိမ်ကိုလာလာပြီး လူကြီးတွေနဲ့ စကားစမြည်ပြော ထမင်းစား ကော်ဖီသောက် လမ်းစရိတ်တောင်းပြီး ပြန်နေကျ။
မဝေက မတင်ဌေးကို ပြုစုနေတာလား ဘာလား မသိပါဘူး။ ခေါင်းကို ယပ်ခတ်လိုက် ခြေထောက်ကို နှိပ်လိုက် ရှူဆေးတွေ သွေးဆေးတွေ ရှူခိုင်းလိုက်နဲ့ ပြာယာခတ်နေတာပဲ။ မတင်ဌေးက တော်ရုံ နေမ ကောင်းဖြစ်ခဲတော့ ကျမလဲ နည်းနည်းအံ့သြတာနဲ့ အ၀တ်အစားလဲပြီး သူတို့အနား သွားထိုင်ကြည့်ဖြစ် တယ်။ မတင်ဌေးက မျက်စိမှိတ်ထားပြီး တအင်းအင်း ညည်းနေတယ်။ သွားကြီးစေ့ အံကြိတ်ပြီး ခေါင်းတွေလဲ ခါခါယမ်းယမ်းနဲ့။ ကိုယ်ခန္ဓာကလည်း မငြိမ်ဘူး ရုန်းကန် လှုပ်ရှားနေတယ်။ မဝေကလဲ ခြေမချိုးလိုက် ပေါင်တွင်းကြောကို တက်နင်းလိုက် လုပ်နေတယ်။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ မတင်ဌေးခြေသလုံးမှာ အညိုအမည်းတွေ ထင်လာသလိုပဲ။ ဒါနဲ့ မဝေပဲ တအားနင်းလို့ များလားလို့ မဝေကို ရပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။ လှုပ်ရှားရုန်းကန်နေတဲ့ မတင်ဌေးက တချက်တချက် ငြိမ်သွားပေမဲ့ တချက်တချက်တော့ မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ ကြည့်တယ်။ အသံကလဲ ခပ်အစ်အစ်နဲ့ လည်ပင်းမှာ တခုခုဆို့နေသလိုပဲ။
အမေရောက်လာတော့ မတင်ဌေးကို ဆေးခန်းပို့ပေးဖို့ စီစဉ်တယ်။ ဆေးခန်းနဲ့ အိမ်နဲ့က ၂ မိနစ်လောက် လမ်းလျှောက်ရင် ရောက်ပေမဲ့ သူ့ကြည့်ရတာ အားအင်ကုန်ခမ်း ချိနဲ့နေသလိုမို့ ဆိုက်ကားခေါ်ထားတယ်။ ခြံထဲမ၀င်ဘဲ ခြံပြင်မှာပဲ စောင့်နေတဲ့ ဆိုက်ကားဆီ မတင်ဌေးကို အိမ်ထဲကနေ လူနှစ်ယောက်လောက် တွဲပြီး ပို့ရတယ်။ ဆိုက်ကားဆီလဲ ရောက်ရော သူက မစီးဘူးတဲ့။ ကျမ လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီး လျှောက်သွားပါလေရော။ ဆေးခန်းမှာထိုင်စောင့်တော့လဲ အကောင်းပဲ၊ အလှည့်ကျတော့ ဆရာဝန်မလေး က သွေးပေါင်ချိန်တာတို့ ဘာတို့လုပ် ဟိုစမ်း ဒီစမ်း စမ်းပြီး … ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ကောင်းသားပဲ လို့ပြောပြီး ခေါင်းမူးနေတယ်ဆိုတာနဲ့ စိတ်ကျေနပ်အောင် အားဆေးတလုံး ထိုးပေးလိုက်တယ်။ ဆရာဝန်မလေးက အမေ့ကိုတော့ ခပ်တိုးတိုးကပ်ပြောလိုက်သေးတယ်။ ဒီကောင်မလေး အလုပ်မလုပ်ချင်လို့ မူယာမာယာ များနေတာ နေမှာပါ … ဆိုပဲ။
နောက်တော့ အိမ်ပြန်ရောက်လာရော … အိမ်ထဲရောက်တာနဲ့ သူက ချိနဲ့သလို ပြန်ပြီး ခွေကျသွားပြန် တယ်။ ဟဲ့ ဟဲ့ ဖြစ်ပြန်ပြီဆိုပြီး ဆေးခန်းထပ်ပို့ပြန်တယ်။ ဟိုရောက်ရင် အကောင်း … အိမ်ထဲရောက်ရင် လူမမာ … ဆိုတော့ စိတ်ထဲ သိပ်မသင်္ကာကြတော့ဘူး။ ခုနက မဝေကလဲ ပြောသွားသေးတယ် … ဒါ သွေးရိုးသားရိုး မဟုတ်ဘူး … အမှောင့်ပယောဂ … တဲ့။ မဝေကို သိပ်မယုံကြပေမဲ့ ဟုတ်လေမလားလို့ ဇဝေါ ဇ၀ါ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူတချက်တချက် မညည်းမညူဘဲ စိတ်ကောင်းဝင်နေတုန်းမှာ နင် ဘာတွေ လုပ်ခဲ့လဲ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲ … တခုခုမှားခဲ့သလား … လို့ မေးတော့ … သူက ပြောပြတယ်။
နေ့လည်က ခြံနောက်ဘက်မှာ ဘူးစင်ထိုးဖို့ ခြံရှင်းသတဲ့။ အရင်တုန်းကတော့ ခြံကို ၀ါးရုံပင်တွေနဲ့ စည်းရိုးခတ်ထားတာပဲ။
၈၈ အရေးအခင်း မတိုင်ခင်လေးမှာ အဘိုးရဲ့ အမိန့်အရ ၀ါးခြံစည်းရိုးကို ဖယ်ပြီး တခြံလုံးကို အုတ်တံတိုင်း ကာလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ဝါးပင်တွေက အုတ်တံတိုင်း အတွင်းဘက်မှာ ကျန်နေခဲ့တယ်။ အဲဒီဝါးပင် တွေက အုံလိုက်ကလေး လေးငါး ဆယ်ပင် တစုတဝေး ပေါက်နေတော့ အောက်ခြေက တောင်ပို့ကလေးလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ခြံရှင်းနေတုန်း ၀ါးရုံ တောင်ပို့နားက မြွေတကောင် ထွက်လာလို့ သူက လက်ထဲက ပေါက်တူးနဲ့ လှမ်းရိုက်လိုက်သတဲ့။ ဒါပေမဲ့ မြွေက ဘယ်ရောက်သွားမှန်း မသိဘဲ လိပ်ပြာလေးတကောင်ပဲ တွေ့ရတော့တယ် တဲ့။ သူကလဲ စိတ်ကြီးတယ်၊ မြွေကို မတွေ့တော့ တွေ့တဲ့လိပ်ပြာကိုပဲ မဲပြီး စိတ်တိုတိုနဲ့ လှမ်းအရိုက်မှာ ရုတ်တရက် မိုက်ခနဲဖြစ်ပြီး ချော်လဲကျသွားတယ်တဲ့။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ခုလို ဖြစ်သွား တော့တာပဲ။
သူ့စကားကြားတော့ အားလုံး သဘောပေါက်သွားတယ်။ ဒါဆိုရင် တခုခု ပူးနေတာ သေချာပြီပေါ့။ သူဖြစ်ပုံ ကလဲ တမျိုးပဲ။ တချက်တချက်ကောင်းနေတယ်၊ တချက်တချက်တော့ နာလွန်းလို့ အော်ဟစ် ညည်းညူနေ ရရှာတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဟုတ်သည်ရှိ မဟုတ်သည်ရှိပေါ့ … ဒီတိုင်းထားလို့တော့ မဖြစ်ဘူး၊ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ညနေ စောင်းပြီး အပုပ်ချိန်ရောက်လာပြီ၊ အိမ်သားတွေလဲ လန့်နေကြပြီ ဆိုတော့ ဘုန်းကြီးပင့်ပြီး ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ရင် ကောင်းမယ်ဆိုပြီး အိမ်နားက ဘုန်းကြီးကျောင်းက ရင်းနှီးတဲ့ ဘုန်းကြီးတပါးကို အကျိုးအကြောင်းပြောပြီး သွားပင့်ကြတယ်။ ဘုန်းကြီးက ပထမတော့ အင်တင်တင်ရယ်၊ ဒါမျိုးက အာပတ် သင့်သလားတော့ မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဒကာ ဒကာမတွေရဲ့ အရေးဆိုတော့ ဘုန်းကြီးလဲ မနေသာဘဲ ကြွလာပေးပါတယ်။
ဘုန်းကြီးက အခြေအနေကို အကဲခတ်ပြီး နားလည်သွားပုံရပါတယ်၊ ပါလာတဲ့ ဆေးပြင်းလိပ်ကြီး မီးညှိဖွာပြီး အင်းပြားပေါ်တင်ပြီး သူ့ကိုကပ်ပေးတယ်။ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က တဆတ်ဆတ်တုန်နေတာပဲ။ ဘုန်းကြီးလဲ တော်တော်ကြာကြာ ဖွာလိုက် ကပ်လိုက် လုပ်ပေးပြီး မောသွားတယ်။ အင်း … သိပ်တော့မလွယ်ဘူး … နည်းနည်းကြီးတယ်လို့ မသိမသာ မိန့်တယ်။ နောက်တော့ မေတ္တာပို့ ပရိတ်တွေဘာတွေ ရွတ်ပေးပြီး ပြန်ကြွသွားတယ်။
ဘုန်းကြီးလုပ်ပေးပေမဲ့ သိပ်တော့မထူးခြားဘူး။ ပြန်သွားတော့လဲ အရင်အတိုင်းပဲ။ မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ ကြည့်လိုက်၊ တအင်းအင်း ညည်းလိုက်နဲ့။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ အညိုအမည်းတွေ ပိုများများလာတယ်။ လည်ပင်းမှာပါ အညိုအမည်းတွေ ဖြစ်ပြီး အသံက သိပ်မထွက်တော့ဘူး။ နာတယ် နာတယ်လို့ အော်သံရယ် … တင်းပုတ်နဲ့ ၀ိုင်းရိုက်နေကြတယ် …. ဆိုပြီး မပီမသ ပြောသံရယ်တော့ ကြားလိုက် ရသေးတယ်။
ဒါနဲ့ပဲ မဖြစ်ချေဘူး၊ နောက်ထပ် ဘုန်းကြီးတပါးကို ပင့်အုံးမှ ဆိုပြီး ခြောက်ထပ်ကြီးက ရှမ်းဘုန်းဘုန်း (ယခု ပျံလွန်တော်မူပြီး) ကို ပင့်ပြန်ပါတယ်။ ရှမ်းဘုန်းဘုန်းက နားသိပ်မကြားဘူး။ အင်းတွေဘာတွေ လုပ်တယ်။ မမြင်ရတဲ့လောကနဲ့ စကားတွေဘာတွေ ပြောပြီး အဆက်အသွယ်လဲ ရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ရှမ်းဘုန်းဘုန်းရောက်လာပြီး ဓားပုံစံ ကျွဲချိုကလေးနဲ့ ခပ်ဆတ်ဆတ် ခုတ်ရင်း ပါးစပ်ကလဲ တခုခုရွတ်ပေး နေတယ်။ ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း တဖြည်းဖြည်း ခြေထောက်ကနေ ထွက်သွားသလိုပဲ … နည်းနည်းငြိမ်သလို ရှိသွားတော့ ဘုန်းဘုန်းလဲ ပရိတ်ကြိုးလေး လည်ပင်းမှာချည်ပေးပြီး ပြန်ကြွသွားပါတယ်။
ကျမလဲ တခါမှ ဒါမျိုးမကြုံဖူးတော့ အရမ်းအံ့သြပြီး သူ့အနားက မခွါဘဲ ဖြစ်ပျက်သမျှတွေ တချိန်လုံး စောင့်ကြည့် နေခဲ့တယ်။ (မှတ်မှတ်ရရ အဲဒီအချိန်က စာမေးပွဲနီးနေပြီ၊ ဒါပေမဲ့ စာမဖတ်ဘဲနဲ့ စပ်စုနေခဲ့တာ။) ရှမ်းဘုန်းဘုန်း ပရိတ်ကြိုးချည်ပေးလို့ နည်းနည်းငြိမ်သွားတော့ အိမ်သားတွေလဲ အသီးသီး ကိုယ့်အခန်းကိုယ် ၀င်သွားကြပြီ၊ ကျမကတော့ သူလှဲနေတဲ့ ကွပ်ပျစ်ကလေးမှာ ၀င်ထိုင်ပြီး သူ့ခေါင်းရင်း ကနေ ကမ္မ၀ါ၊ ပရိတ်ကြီး ၁၁-သုတ်၊ ပဋ္ဌာန်း ရှိသမျှ ဘုရားစာတွေ အခေါက်ခေါက် ထိုင်ရွတ်ပေးနေခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် ကမ္မ၀ါကို များများရွတ်ပါတယ်။ ကမ္မ၀ါရွတ်ရင် မကောင်းဆိုးဝါးတွေ မလာဘူး၊ ပြေးတယ်လို့ သိထားတာကိုး။
ကျမ ကမ္မ၀ါရွတ်ပြီဟေ့ဆိုရင် သူက မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်ပြီး လည်ချောင်းအစ်သံကြီးနဲ့ မရွတ်နဲ့ … နားညည်း တယ် … လို့ပြောတယ်။ ဘယ်ရမလဲ ကျမလဲ ဆက်ရွတ်တာပါပဲ၊ ပိုတောင် အသံပြင်းပြင်းနဲ့ ဆောင့်ဆောင့် ရွတ်လိုက်သေးတယ်။ နောက်တော့ သူက တဆင့်တက်လာပြီး ကျမကို ခိုင်းတယ်။ လည်ပင်းက ပရိတ်ကြိုး ဖြုတ်ပေးပါ … တဲ့။ ဒီလောက်တော့ ကျမက လည်ပါတယ်၊ ဘယ်ဖြုတ်ပေးလိမ့်မလဲ။ ဒါပေမဲ့ သူကလဲ ပိုတော့အလည်သား … ကျမကို လာညှိတယ်၊ ပရိတ်ကြိုးဖြုတ်ပေးရင် ထွက်မယ်ဆိုပဲ။ တကယ်လား ဆိုတော့ … အင်း …. တဲ့။ ကျမလဲ ဖြုတ်ပေးရ ကောင်းနိုးနိုး စဉ်းစားနေမိသေးတယ်။ ဖြုတ်တော့ မဖြုတ်ဖြစ် လိုက်ဘူး။
ခဏနေတော့ ဒင်းက ကြမ်းလာပြန်တယ်။ အနားမှာထောင်ထားတဲ့ သင်ဖြူးဖျာလိပ်ကို ပြေးပြီးကန်တယ်။ အပွေးကုန်နေတဲ့ သနပ်ခါးတုံး၀၀ကြီးကို ပစ်ပေါက်တယ်။ အဲဒီဖျာလိပ်မှာ ကပ်နေကြတာ …. လို့လဲ လက်ညှိုးကြီးထိုးပြီး ပြောတယ်။ ကျမတို့မှာ ဖျာလိပ်ကြီး အိမ်နောက်ဖေးပို့ထားရတယ်။ ကြောက်လို့။ အကောင် တွေ အများကြီး ပြောင်ပြနေကြတယ်လို့လဲ ဆိုတယ်။ သွားသွား ဆိုပြီး အော်ပြီး ပြေးကန်လိုက် ဟိုဟာနဲ့ ပေါက် ဒီဟာနဲ့ပေါက် လုပ်လိုက်မို့ ကျမတို့မှာ တီဗီထိမှာစိုးလို့ လိုက်ဆွဲနေရသေးတယ်။ အဲလိုတွေ ဖြစ်ပြန်တော့ မထွက်သေးဘူးဆိုတာ သေချာသလောက်ပဲပေါ့။ ဒီလိုသာဆို ဘာမှန်းမသိတဲ့ အကောင် တွေနဲ့ တညလုံး တအိမ်ထဲ အတူနေရမလို ဖြစ်နေတာနဲ့ နောက်ထပ်ဘုန်းကြီးတပါး ထပ်ပင့်ကြရပြန်တယ်။ အဲဒီဘုန်းကြီးကတော့ ကျမကို ပုံပြောပြလေ့ရှိတဲ့ ခြောက်ထပ်ကြီး သာသနာ့သိပ္ပံကျောင်းက ဆရာတော်ပါ။ (သံဃာအရေးအခင်းမှာ အဖမ်းခံရပြီး နောက်ပိုင်း သိပ်မကြာခင်မှာ ပျံလွန်တော်မူသွားပါပြီ။) ဆရာတော်ကို သွားပင့်တော့ ကိုယ်တိုင် လိုက်မလာပါဘူး။ ကျမအမကြီးကို တပည့်အဖြစ် လက်ဝါးချင်းရိုက် သတ်မှတ်ပြီး ရုပ်ပုံထွင်းထားတဲ့ ခပ်ညိုညို အတုံးလေးတခု ပေးလိုက်တယ်။ အဲဒါလေးနဲ့ခေါက်ပြီး ဘယ်လိုဘယ်လိုပြော ဆိုပြီး သင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ညကလည်း တဖြည်းဖြည်း နက်လာပြီ။ အမကြီးလည်း ဆရာတော်သင်ပေးသလို ကြိုးစားလုပ်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘာမှမထူးခြားဘူး။ မတတ်သာတဲ့အဆုံး ဆရာတော်ကို ပြန်သွားလျှောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်လိုက်ခဲ့ဖို့ တောင်းပန်ကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ဆရာတော်လည်း အိမ်သားတွေကို သနားတာနဲ့ လိုက်လာ ခဲ့တယ်။
ဆရာတော် အိမ်ရောက်လာတော့ မတင်ဌေးကို သူ့ရှေ့မှာ ထိုင်ခိုင်းပြီး ဆရာတော်နဲ့ မတင်ဌေး အမေး အဖြေ လုပ်ကြပါတယ်။ မတင်ဌေးရဲ့ အသံက ပျက်သလောက် ဖြစ်နေပြီ၊ သေချာမဖြေနိုင်တော့ဘူး။ များသော အားဖြင့် လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့သာ ဖြေတယ်။ စကားပြောဖြေတဲ့အခါ ကျမက သူ့ပါးစပ်နားကို ကပ်နားထောင်ပြီး ဆရာတော်ကို ပြန်ပြောပြရတယ်။ ကြားထဲက translator ဆိုပါတော့။ ဆရာတော်နဲ့ မတင်ဌေး အမေးအဖြေလုပ်တဲ့အတိုင်း ပြန်ရေးပြပါမယ်။
“မင်းတို့က ဘယ်သူတွေလဲ ဘယ်ကလဲ”
“… … …” (မြွေပါးပြင်းထောင်သလို လက်ကိုလုပ်ပြီး နဖူးမှာအမောက်လို ကပ်ပြတယ်။)
“မင်းတို့ ဘာဖြစ်လို့ ဒီကလေးမလေးကို နှောက်ယှက်ရတာတုန်း”
“ငါတို့ ခေါင်းဆောင်ကို xxx ” (နောက်ကစကားကို သေချာမကြားရဘူး။)
“သူလုပ်တာ xxx” (ခေါင်းကို လက်နဲ့ကိုင်ပြတယ်။)
“ဟ … ဒါ မတော်တဆ ဖြစ်တာပဲ … ခွင့်လွှတ်ရမှာပေါ့”
(မျက်ထောင့်ကြီး နီလာပြီး ပြောတယ်။ နှာခေါင်းကလဲ တရှူးရှူးနဲ့ နှာတွေမှုတ်ပြီး အသက်ရှူသံပြင်း လာတယ်။)
(အံကြိတ်ပြီး လည်ပင်းကို ဖြတ်တဲ့ပုံ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ လုပ်ပြတယ်။)
သူ့ရုပ်ကြီးကို ကြည့်ပြီး ကျမလဲ ကျောထဲက စိမ့်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ ကြောက်လိုက်တာ။ ဒါပေမဲ့ ဆရာတော် အနားမှာရှိလို့ မကြောက်သလိုနဲ့ ခပ်တည်တည်ပေါ့။
“ဒီလိုလုပ်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ … ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့”
ဆရာတော်က ရွှေပြည်အေးတရားဟောပေမဲ့ ဟိုက အပြတ်ရှင်းမယ်ဆိုတာချည်းပဲ။ တော်သေးတာက ပရိတ်ကြိုးချည်ထားတော့ အပြတ်ရှင်းမရဘူး ဖြစ်နေတာတဲ့။ ကျမသာ အူတူအတနဲ့ သူတို့ပြောတာယုံပြီး ဖြုတ်ပေးလိုက်မိရင် သွားပြီ။
နောက်ဆုံးတော့ ဖြစ်ပုံကို ဆရာတော်က ရှင်းပြပါတယ်။ ဟိုးအရင်ခေတ်တုန်းက ဒီနားတ၀ိုက် ရွာကလေး မှာ နေသွားသူ တယောက်တလေက အဲဒီဝါးရုံပင်အောက်က တောင်ပို့ကလေးမှာ ရွှေတိုရွှေစလေးတွေ မြှုပ်ခဲ့သတဲ့။ သူမြှုပ်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းအစွဲနဲ့ ဒီနေရာမှာ အစောင့်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နောက်တော့ တဖြည်းဖြည်း အကောင်ကြီးပြီး အပေါင်းအဖော်တွေ တပည့်လက်သားတွေ များလာပုံပါပဲ။ မတင်ဌေး ဘူးစင်ထိုးဖို့ တောင်ပို့နားမှာ မြေပေါက်တော့ သူတို့ပစ္စည်းတွေ တူးယူမယ်မှတ်ပြီး ခေါင်းဆောင်ကြီးက ခြောက်လှန့်ဖို့ မြွေအဖြစ်နဲ့ ထွက်လာတာ။ မတင်ဌေးက မကြောက်ဘဲ ရိုက်လိုက်တော့ ခေါင်းမှာ ဒဏ်ရာရ သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပူးပြီး အသေသတ်ဖို့ လုပ်ကြတာ။
ခေါင်းဆောင်ကြီးထိတော့ တပည့်လက်သားတွေက စိတ်ဆိုးပြီး မတင်ဌေး လည်ပင်းကို ညှစ်၊ တကိုယ်လုံး ကို တင်းပုတ်တွေနဲ့ ရိုက်၊ ဒေါသဖြစ်အောင် အမျိုးမျိုး ပြောင်ကြ နောက်ကြနဲ့ ၀ိုင်းသမကြတာပေါ့။ ဒါကြောင့် ခမျာမှာ အညိုအမည်းတွေ ပေါ်ပြီး ထွန့်ထွန့်လူး ညည်းညူနေရရှာတာပါ။ အဲ … ခြံထဲကလဲ ထွက်တော့ သူတို့ပိုင်နက် ကျော်သွားတာမို့ ဆက်မလိုက်ကြတော့ဘူး၊ ဒါကြောင့် ဆေးခန်းရောက်ရင် အကောင်းပတိ ဖြစ်နေတာတဲ့။ သူတို့ကလဲ ပူးတုံခွါတုံပါ။ ပူးနေချိန်ဆို မျက်ထောင့်နီနီ အံကြီးကြိတ်ထားတယ်။ ခွါနေချိန်ဆို ဖျာလိပ်တို့ သနပ်ခါးတုံးတို့လို သစ်ဝါးနဲ့ လုပ်တဲ့အရာတွေကို ကပ်ပြီး မတင်ဌေးမြင်သာအောင် အမျိုးမျိုး ခြောက်လှန့်ကြ နောက်ပြောင်ကြတယ်။ ပုံစံတွေက ရုပ်ကြမ်းကြီးတွေ အကြေးခွံအကွက် အကွက်တွေလဲ ပါသတဲ့။ (အဲဒါက နောက်ပိုင်း မတင်ဌေးပြန်ပြောပြတာပါ)
အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြပြီးနောက် ဆရာတော်က သူ့သီလနဲ့ တိုင်တည် သစ္စာပြုပြီး နတ်တွေ အကုန်လုံးကို ပင့်ဖိတ်တယ်။ ဒီအိမ်မှာနေတဲ့သူတွေကို မနှောက်ယှက်ဖို့ သူတို့ထက် စီနီယာနတ်တွေကို အမိန့်ပေးခိုင်း တယ်။ မင်းတို့ကိုလဲ မနှောင့်ယှက်ဘူး၊ အိမ်သားတွေကိုလဲ မနှောင့်ယှက်နဲ့။ ဒါကိုမှ နှောင့်ယှက်မယ်ဆိုရင် မင်းတို့ဒီမှာ မနေရအောင် လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့လဲ ပြောတယ်။ ပြီးတော့ နွားနို့ရယ် ပေါက်ပေါက်ရယ် အမွှေးတိုင်ရယ် အဲဒီတောင်ပို့နားမှာ သွားချပြီး မတင်ဌေးကိုယ်တိုင် တောင်းပန်ခိုင်းတယ်။ နဂါးစောင့်တဲ့ သိုက်မို့ နွားနို့ပေါက်ပေါက်နဲ့ တောင်းပန်ရတာလို့ ပြောတာပဲ။
ညဘက်မို့ ခြံထောင့်က တောင်ပို့နားမှာ အတော်လေး မှောင်နေပါတယ်။ အဲဒီနားမှာ သရက်ပင် သုံးပင် တြိဂံလို ပေါက်နေတဲ့နေရာကို ကျမတို့ငယ်ငယ်က မြေပုံတွေဘာတွေ ဆွဲပြီး ရတနာသိုက် ရှာတမ်း ကစားခဲ့ဖူးသေးတယ်။ ခုတော့ တောင်ပို့က ရတနာသိုက် ဖြစ်နေပါရောလား။ မတင်ဌေး သွားတောင်း ပန်တော့ ကျမတို့လဲ ခပ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ လိုက်သွားကြည့်ကြတယ်၊ ဘာမှတော့ မမြင်ခဲ့ရဘူး။ ၀ါးရုံပင်က လေတိုက်လို့ တရှဲရှဲမြည်တာနဲ့ ကြောက်ပြီး ပြန်ပြေးလာခဲ့ကြတာပဲ။
ခြံနောက်ဘက်မှာက သစ်ပင်ကြီးတွေအပြင် ရေတွင်းအိုကြီးရယ်၊ အိမ်သာ သုံးလုံးရယ်၊ ရေစင် အမြင့်ကြီး တခုရယ် ရှိတယ်။ အရင်ကတော့ ပြေးလွှားဆော့ကစားကြ စစ်တိုက်တမ်း တူတူပုန်းတမ်းကစားကြတဲ့ နေရာဆိုပါတော့။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျမတို့တွေ ခြံနောက်ဘက်ကို နေ့ရော ညပါ မသွားရဲကြတော့ဘူး။ အိမ်သာ ကိုလဲ အိမ်ထဲက အိမ်သာပဲ သွားဖြစ်ကြတော့တယ်။ မယုံဘူးလို့ အမြဲပြောလေ့ရှိတဲ့ကျမလဲ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်တွေ့ကြုံရတော့ မယုံချင်လို့ မရတော့ပါဘူး။ တခြားသူတွေ တစ္ဆေသရဲ ပူးပြီး ပြန်ထွက် သွားရင် ဘယ်လိုနေသလဲ မသိပေမဲ့ မတင်ဌေးကတော့ ရက်အတော်ကြာမှ အညိုအမည်းတွေ ပျောက်ပြီး အသံလဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ထွက်လာပါတယ်။
သူတို့ကို တစ္ဆေလား သရဲလား ဥစ္စာစောင့်လား နတ်နဂါးလား ဆိုပြီး တခုခုတော့ ခေါင်းစဉ်မတပ်ချင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ သေချာတာကတော့ မျက်စိနဲ့ မမြင်ရတဲ့ ဒီလိုလောကသားတွေ ရှိနေတယ်၊ သူတို့နဲ့ ကိုယ်က ကြားခံ နယ်ချင်း မတူလို့ နိစ္စဓူဝ မမြင်မတွေ့ရပေမဲ့ ခုလို အခန့်မသင့်တဲ့အခါမျိုးမှာ တွေ့မြင်နိုင်သလို ၀င်ရောက် ပူးကပ်နိုင်တယ်၊ သူတို့ကိုကိုယ်က မထိခိုက် မစော်ကားဖို့နဲ့ ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါ အမျှဝေဖို့ မေတ္တာပို့ ပေးဖို့ လိုတယ် ဆိုတာကိုတော့ ကျမ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။
CD / DVD Label Designer With Keygan
CD Label Designer လေးကတော့ CD / DVD အခွေရဲ့ Cover Photo လုပ်ပေးတဲ့ ဆောဝဲလေးပါ။ အခွေကူးသမားတွေအတွက် ပုံထုတ်တာ အရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ သုံးရတာ လွယ်လည်း လွယ်ကူ ပါတယ်။ CD / DVD အလွေကူးသမားတွေအတွက် Cover ပုံ ထုတ်ဖို့ ဒီဆောဝဲလေးက တကယ် ကိုဆောင် ထားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံ၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံဒီဇိုင်း ကို အလှပဆုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ Full Version သုံးလို့ရအောင် Keygan ပါ တင်ပေးထားပါတယ်။ အောက်မှာ Screenshots ပါပြပေးထားပါတယ်။ သုံးရတာ အရမ်းလွယ်ကူတာကြောင့် နည်းကိုမရေးတော့ဘူးနော်။ အသေးစိတ်လေ့လာချင်ရင်တော့ မူရင်း လင့်
>>>>>Download CD / DVD Label Designer Full Version<<<<<
တစ်နှစ်လျှင် တရုတ်ယွမ်ငွေ ၂၅၀၀၀ ဖြင့် ထမင်းချက် အလုပ်ရမည်ဟုပြောကာ တရုတ်အမျိုးသားနှင့် အဓမ္မ လက်ထပ်ခိုင်းမှု ဖြစ်ပွား
Posted by drmyochit Sunday, October 20, 2013, under သတင်းများ | No comments
တစ်နှစ်လျှင် တရုတ်ယွမ်ငွေ ၂၅၀၀၀ ဖြင့် ထမင်းချက် အလုပ်ရမည်ဟု ပြောဆိုကာ တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာအတွင်း နမ့်ခမ်းမြို့နေ မ..... အား တရုတ်နိုင်ငံတွင် ထမင်းချက် အလုပ်ရမည်ဟု လိမ်လည်ပြောဆို စည်းရုံးပြီး တရုတ်ယောက်ျားနှင့် အဓမ္မ လပ်ထပ်ယူရန် ရောင်းစားခဲ့သူ မနန်းအေးထွမ်(ခ) မနန်းအောင်ခမ်းနှင့် မနန်းခမ်းမိုင်တို့အား အရေးယူပေးပါရန် တရားလိုပြု လုပ်တိုင်တန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ လူကုန်ကူးခံရသူ မ....သည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့် စကားများရန်ဖြစ်ပြီး နေအိမ်မှ တရုတ်နိုင်ငံ ရွှေလီသို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ရွှေလီမြို့ ပေါက်ဆန်းဈေးတွင် ယခင်က ဈေးအတူရောင်းသူ မနန်းအေတွမ် (ခ) နန်းအောင်ခင်နှင့် တွေ့ရှိကာ နန်းအေတွမ်က တရုတ်ပြည် အတွင်းပိုင်းတွင် အလုပ်အကိုင် ပေါများကြောင်း၊ တစ်နှစ်လျှင် စရိတ်ငြိမ်း တရုတ်ငွေ ၂၅၀၀၀ ရမည့် ထမင်းချက်အလုပ် ရှိကြောင်း ပြောဆိုသဖြင့် ၎င်းမှာ သဘောတူ ခဲ့ကြောင်း၊ နောက်တစ်ရက်တွင် အမည်မသိ တရုတ် အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ရောက်ရှိပြီး ၎င်း အမျိုးသမီးနှစ်ဦးမှာ အလုပ်ရှင်များဖြစ်ကြောင်း လိုက်သွားရန်ပြောသဖြင့် ၎င်းအမျိုးသမီးနှစ်ဦးနှင့် လိုက်သွားခဲ့ကြောင်း၊ ရွှေလီမှ တရုတ်နိုင်ငံ ကွေ့ကျို့မြို့ရှိ အမျိုးသမီးနှစ်ဦး နေအိမ်သို့ ရောက်ရှိကာ ယင်းတို့၏ မောင်ဖြစ်သူ တရုတ်အမျိုးသား လျန်ဖိန်းဆိုသူနှင့် လက်ထပ်ရန် ပြောဆိုသဖြင့် မ.....မှာ ထမင်းချက် အလုပ်လုပ်ရန် လိုက်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်ယောက်ျား မယူလိုကြောင်း ပြောဆို ငြင်းဆန်ရာ မ....အား တရုတ်ယွမ်ငွေ ၂၅၀၀၀ ဖြင့် ၀ယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နေအိမ်ရှိ အခန်းထဲတွင် ၁၅ ရက်ခန့် ပိတ်ထားခဲ့ကြောင်း၊ ချုပ်နှောင်မှုကို မခံနိုင်၍ တရုတ်ယောက်ျားနှင့် အဓမ္မ လက်ထပ်ခြင်း ခဲ့ရကြောင်း၊ တစ်လခန့် ပေါင်းသင်းခဲ့ပြီးနောက် တရုတ်ယောက်ျားအိမ်မှ ထွက်ပြေး၍ တရုတ်နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အရေးပေါ်ဖုန်းသို့ အကူအညီ တောင်းခံခဲ့ကြောင်း၊ ကွေ့ကျိုးမြို့ ရဲစခန်းမှ တရုတ်ရဲများ ရောက်ရှိလာကာ ခေါ်ယူစစ်မေးရာမှ လူကုန်ကူးခံရသူ ဖြစ်ကြောင်းသိရ၍ နေအိမ်သို့ ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ကြောင့် တရုတ်ယောက်ျားနှင့် အဓမ္မ လက်ထပ်ရန် ရောင်းစားခဲ့သူ မနန်းအေတွမ် (ခ) မနန်းအောင်ခမ်းနှင့် မနန်းခမ်းမိုင်တို့ နှစ်ဦးအား အရေးယူပေးပါရန် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးနှိမ်နင်းရေး တပ်ဖွဲ့စု(မူဆယ်)မှ တရားလိုပြုလုပ် တိုင်တန်းခဲ့သဖြင့် နမ့်ခမ်းရဲစခန်း (ပ)၇၇/၂၀၁၃ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူ ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
လူဗန်းကက်သလစ် တက္ကသိုလ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ ဒေါ်စုလက်ခံရယူ
ဘယ်လ်ဂျီယံဘုရင်နဲ့ မိဖုရားက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို Laeken နန်းတော်တွင် တွေ့ဆုံစဉ်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်၊ စနေနေ့ ဒီကနေ့မှာ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာ ရောက်နေပြီဖြစ်ပြီး လူဗန်း ကက်သလစ်တက္ကသိုလ် (Universite catholique de Louvain) မှာ စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီတက္ကသိုလ်က ချီးမြှင့်ထားတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုလည်း လက်ခံ ရယူခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ တတိယအကြိမ် ဥရောပခရီးစဉ်အကြောင်းကိုတော့ ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီကနေ့ ဘရပ်ဆဲလ်မြ်ို့ဆီ ရောက်သွားပြီးတဲ့နောက် ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၃ နာရီက လူဗန်း ကက်သလစ် တက္ကသိုလ်မှာ စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီပွဲကို လူ ၁,၀၀၀ ကျော် တက်ရောက်မယ့်အကြောင်း တက္ကသိုလ်ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဘရူနို ဒန်ဗူး (Bruno Denvaux) က အစောပိုင်းမှာ ဗွီအိုအေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
“နိုင်ငံရေးမှာ သဒ္ဓါတရားနဲ့ ကရုဏာတရား ထားရှိရေး” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောခဲ့တာပါ။
တဆက်ထဲမှာပဲ လူဗန်းကက်သလစ်တက္ကသိုလ်က ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက ချီးမြှင့်ထားတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ကို လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် လက်ခံရယူခဲ့ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာနဲ့ တက္ကသိုလ်က အလေးအမြတ်ထားတဲ့ တန်ဖိုးတွေအတွက် ရုန်းကန် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့် ဒီဆုကို ချီးမြှင့်တာဖြစ်တယ်လို့ မစ္စတာဒန်ဗူးက ပြောပါတယ်။
“ထူးချွန်ပြောင်မြောက်တဲ့ လူတွေက လွတ်မြောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး စတဲ့တန်ဖိုးတွေအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးဆီ ရောက်ရှိစီးဆင်းစေချင်တဲ့အတွက် ဒီလိုဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို ကျနော်တို့တက္ကသိုလ်ကနေ ချီးမြှင့် ပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။”
ဒီဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ကို ပေးအပ်ချိန်တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျနေတာမို့ ကိုယ်တိုင် သွားမယူနိုင်ခဲ့ဘဲ ကွယ်လွန် သွားပြီဖြစ်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်လ် အဲရစ်စ် လက်ခံရယူခဲ့တယ် လို့ ညွန်ကြားရေးမှူး မစ္စတာဒန်ဗူးက ပြောပါတယ်။ အခုတစ်ကြိမ်မှာမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် တက္ကသိုလ်ဆီသွားရောက်ပြီး လက်ခံရယူနိုင် တာပါ။
အခုလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် တက္ကသိုလ်ဆီ လာရောက်တဲ့အပေါ် သူဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာကို မစ္စတာဒန်ဗူးက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
“သိပ်ကိုဝမ်းသာပျော်ရွှင်ပြီး အင်မတန် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆီလာပြီး ဒီကလူ တွေနဲ့ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး၊ ကျောင်းသားတွေနဲ့ စကားပြောတာ ဟာဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တက္ကသိုလ်ကိုပေးတဲ့ သိပ်ကောင်းမွန်တဲ့ လက်ဆောင်ပါ။ သူက မိနစ် ၂၀ ကြာ စကားပြောပြီးတဲ့နောက် အမေး အဖြေ လုပ်ကြမှာပါ။ ဒါဟာ သိပ်ကို ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကျောင်းသားအားလုံး အတွက်တော့ သူမတူတဲ့ အခွင့်အလမ်းပါပဲ။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အောက်တိုဘာလ ၁၈ ရက် သောကြာနေ့က မြန်မာနိုင်ငံကနေ ထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုတစ်ကြိမ် ဥရောပခရီးစဉ်က နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့အထိ ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ခရီးစဉ်အတွင်း အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့ နေ့လည်ပိုင်းကျရင် ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာ ဥရောသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌ Herman van Rompuy၊ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်၊ တနင်္လာနေ့ကျရင် လူဇင်းဘိုမှာ ဥရောပကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ Jose Manuel Barroso တို့နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက် အင်္ဂါနေ့ ကျရင်တော့ ပြင်သစ်နိုင်ငံ Strasbourg မှာ ဥရောပပါလီမန်ကပေးထား တဲ့ ဆာခါရော့ဗ်ဆုကို လက်ခံရယူမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ Sandhurst စစ်တက္ကသိုလ်မှာ စကားပြောဖို့၊ မြောက်ပိုင်း အိုင်ယာလန်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လေ့လာဆွေးနွေးဖို့၊ အီတလီနိုင်ငံမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အစဉ်တစိုက် ထောက်ခံ အားပေးခဲ့တဲ့ မြို့ ၄ မြို့ဆီ သွားရောက်ဖို့ အစီအစဉ်တွေရှိတယ်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အစောပိုင်းမှာ သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
နန်ကျင်းမြို့တော်ဝန် လာဘ်စားမှုနဲ့ အထုတ်ခံရ
အဂတိလိုက်စားမှုသံသယနဲ့ ရာထူးကဖယ်ရှားခံရသူ နန်ကျင်းမြို့တော်ဝန် Ji Jianye (ယာ)
အဂတိတိုက်ဖျက်ရေးကို အပြင်းအထန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံ့အရှေ့ပိုင်း အဓိကမြို့ကြီး တစ်ခုရဲ့ မြို့တော်ဝန်ကို ရာထူးက ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့ တရုတ်မီဒီယာတွေက ဖော်ပြပါတယ်။
နန်ကျင်းမြို့တော်ဝန် Ji Jianye ကို ပြင်းထန်တဲ့စည်းကမ်းချိုးဖောက်မှုတွေအတွက် သံသယရှိတယ်လို့ ဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံပိုင်ရှင်ဟွာသတင်းဌာနမှာ စနေနေ့က ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို ဆက်လက်ဖော်ပြမထားပေမဲ့ ဒါဟာ အဂတိလိုက်စားမှုတမျိုးမျိုးအတွက် သုံးနေကျ အသုံးအနှုန်း ဖြစ်ပါတယ်။
နန်ကျင်းဒေသပါတီ ဒုတိယ အကြီးအကဲလည်းဖြစ်တဲ့ မြို့တော်ဝန် Ji ကို ရာထူးက ဖယ်ရှားလိုက်တာဟာ သူ့ကို ကွန်မြူနစ်ပါတီ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး နှစ်ရက်အကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံတလွှား အဂတိမှုတွေကို နှိမ်နင်းတိုက်ဖျက်သွားဖို့ ကျီရှင်ဖျင်က ကတိပြုထားတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေမှာ အောက်ခြေအဆင့် တပ်ဖွဲ့ဝင် ပါဝ...
စွယ်စုံသုံး အင်တာနက် ကွန်နရှင်နဲ့ PC ရဲ့ Speed ကို...
နန်းခင်ဇေယျာ ဦးဆောင်မယ့် နိုင်ငံခြား မယ်တွေနဲ့ မြ...
မန္တလေးမြို့တွင် လိုင်စင်မဲ့ ကားတစ်စီး စွန့်ပစ်ထားရ...
ကျပ်ငါးသိန်းနှင့် ရွှေလုပ်ကွက်ပေးမည်ဟု ပြောဆိုပြီး ...
သူရိယအလင်းဂျာနယ်တိုက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ကိစ္စ နှစ်...
ဗုံးကိစ္စရှင်းလင်းရန် အစိုးရနှင့် KNU ထိပ်တန်းခေါင်...
ဗုံးကွဲမှု သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ရဲချုပ်ပြောဆိုချက် အ...
ရှာဘတ်ဗီဒီယိုတွင် ပါဝင်သော သြဇာရှိ ဗြိတိန်မွတ်စလင်...
တစ်နှစ်လျှင် တရုတ်ယွမ်ငွေ ၂၅၀၀၀ ဖြင့် ထမင်းချက် အလ...
လူဗန်းကက်သလစ် တက္ကသိုလ် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ ဒေ...